Dr. Tint Swe's Writings: 2014
အင်တာနက် ဆေးသုတေသန JMIR မှာရေးသားလိုက်တဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်မှုအဖြေတွေကို သည်လိုတွေ့ရပါတယ်။
• အမေရိကားမှာ Dutch community ဒတ်ခ်ျလူမျိုးအုပ်စု ၁၆့၆ သန်းနေထိုင်နေကြတဲ့အထဲမှာ ၉့၇ သန်းကို လေ့လာ ဆန်းစစ်မှုလုပ်ခဲ့တယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်မှုမှာ ၆၃၅ ယောက်က အဖြေတွေပေးခဲ့ကြတယ်။
• ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက် ရှာဖွေရာ ၈၂့၇% အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုကြတယ်၊
• ဆေးပညာရှင်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များနောက်ကလိုက်သူ ၇၁့၁%၊
• ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူများ၏ အဆင့်အတန်းကို စုံစမ်းကြသူ ၃၂့၂%၊
• အများဆုံးသိချင်ကြသည့် ဆေးပညာသတင်းအချက်အလက်မှာ ဆေးများ၏ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ ၆၃့၅%၊
• ဒုတိယလိုက်တာက ရောဂါလက္ခဏာကိုသိချင်သူများ ၅၉့၇%၊
• ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူများနှင့် ဆက်သွယ်လိုသူ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်း၏ ၂၅့၎%၊
• သူတို့ထဲက ၂၁့၂% က Webcam ဝက်ဘ်-ကင်မ် နဲ့ ဆက်သွယ်ကြ၊ ၂၅% က Social Media ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေ ဆက်သွယ်ကြတယ်။။
လူနာတွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကုသမပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ http://doctortintswe.blogspot.com/ ဘလော့ခ် ဆန်းစစ်မှုလုပ်တော့ သည်လိုတွေ့ရပါတယ်။
• Myanmar (Burma) = 3809
• United States = 597
• Singapore = 391
• Malaysia = 241
• South Korea = 166
• Thailand = 155
• India = 123
• France = 43
• Japan = 32
• Germany = 10
• Android 3801 (67%)
• Windows 1255 (22%)
• iPhone 303 (5%)
• Macintosh 165 (2%)
• iPad 81 (1%)
• Linux 23 (<1%)
• HUAWEI3(<1%)
• Android 2.3.3 1 (<1%)
• BB10 1 (<1%)
• Pageviews yesterday = 1,030
• Pageviews last month = 23,668
• Pageviews all time history = 48,235
1. STDs Basic လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများအခြေခံ Dec 29, 2014 = 142
2. Infertility Treatments (1) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ Nov 7, 2014 = 112
3. Clomiphene Citrate ကလေးမရနိုင်သူများအတွက်ဆေး Dec 1, 2014 = 85
4. Vulvovaginitis အမျိုးသမီးအင်္ဂါ ရောင်ခြင်း Dec 29, 2014 = 78
5. Museum of Menstruation ရာသီပြတိုက် Dec 30, 2014 = 64
6. Hepatitis C (စီ) ပိုး Nov 15, 2014 = 60
7. Omega-3 (အိုမီဂါ သရီး) ဘာလို့ နာမည်ကြီး Nov 19, 2014 = 55
8. August သြဂုတ်လ Nov 26, 2014 = 49
9. Vaginal itching မိန်းမကိုယ်ယားခြင်း Dec 29, 2014 = 44
10. Blocked Fallopian Tubes သားအိမ်ပြွန်ပိတ်ခြင်း Nov 7, 2014 = 40
1. Infertility Treatments (1) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၁)
2. Clomiphene Citrate ကလေးမရနိုင်သူများအတွက်ဆေး
3. Diabetes ဆီးချို
4. Blocked Fallopian Tubes သားအိမ်ပြွန်ပိတ်ခြင်း
5. How to ask ကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးပညာ မေးခွန်းစည်းကမ်း
6. Cosmetic Procedures လှချင်ရက်စက်စက်ယို
7. Hepatitis C (စီ) ပိုး
8. Young father ယောက်ျားကအသက်ငယ်နေရင် ဥာဏ်ရည်မမှီတဲ့ကလေး မွေးတတ်သလား
9. STDs Basic လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအခြေခံ
10. ADHD ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိမမူတဲ့ စိတ်ရောဂါ
"ကင်ဆာ နဲ့ အစားအစာ ဆက်စပ်တယ်" လို့ ပြောသူတွေ မနည်းပါ။ အတိအကျတော့ ဆရာဝန်တွေကမှ မပြောနိုင်ပါ။ ကင်ဆာကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားကိုလဲ အသေအခြာမသိရဘဲ (သီအိုရီ) ကသာ များနေသလို အတူတူပါဘဲ။
တချို့လေ့လာမှုတွေက ကင်ဆာကို ဖြစ်စေတာထဲမှာ ပါတ်ဝန်းကျင် အကြောင်းခံတွေက ၈ဝ-၉ဝ% ပါမယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အစားအစာက ၃ဝ-၄ဝ% သက်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောထားတယ်။ များသောအားဖြင့် သုတေသနတွေဟာ ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရေးမှာသာ လုပ်ကြတာ ဖြစ်ပြီး၊ အစားအစာနဲ့ ကင်ဆာကုဘို့ရာလဲ အနည်းအပါးတော့ ရှိတယ်။
ကင်ဆာဖြစ်စေတာတွေထဲမှာ Obesity လူအဝလွန်တာနဲ့ Alcohol အရက်သေစာဟာ တရားခံစာရင်းမှာ ထိပ်ကနေတယ်။ Fruits အသီးတွေနဲ့ Vegetables အသီးအရွက် အစားနည်းပြီး Red meat အသားစား ကဲတာတွေကလဲ နောက်ကလိုက်တယ်။ ကော်ဖီလဲ ပါသေးတယ်။ အသားစားများတာနဲ့ Breast cancer ရင်သားကင်ဆာ၊ Colon cancer အူမကြီးကင်ဆာ၊ Pancreatic cancer သရက်ရွက်-ကင်ဆာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ပြောတာရှိတယ်။
အကောင်းဆုံးလို့ အများဆုံး ပြောတာတွေကတော့ Vegetables ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ Fruit သစ်သီးတွေ၊ Whole grain သိပ်ဖြူနေအောင် ချွတ်မတားတဲ့ အနှံတွေ နဲ့ Fish ငါးတွေ ဖြစ်တယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို Fibre (ဖိုက်ဘာ) ပါတဲ့ အစာတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး၊ Antioxidant (အင်တီ-အောက်စီဒင့်) တွေပါတယ်။ အသီးအရွက်တွေမှာပါတဲ့ Flavonoids (ဖလဘိုနွိုက်) နဲ့ Catechins (ကက်တ်ချင်) ဓါတ်တွေဟာ "ခါးတဲ့အရသာ" ရှိတယ်။ အလွန် ကောင်းတဲ့ ကင်ဆာ-ကာကွယ်ဆေးတွေ ဆိုပြီးတောင်မှ ပြောကြတယ်။ Catechins ဟာ ဗီတာမင် (စီ) ထက် အဆ ၁ဝဝ သာသတဲ့။ (အီး) ထက် ၂၅ ဆ သာသတဲ့။ Flavonoids နဲ့ Catechins အတူတွဲရင် (ဆဲလ်) တွေကို X-ray damage ဓါတ်မှန်ရဲ့ ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါသေးတယ်။
Flavonoids များတဲ့ အစာတွေထဲမှာ Garlic ကြက်သွန်ဖြူ၊ Onions ကြက်သွန်နီ၊ Shallots ကြက်သွန်နီကလေး၊ Leeks ကြက်သွန်မြိတ်တွေ ပါတယ်။ ဒါတွေထဲမှာ Vitamin C ဗီတာမင် (စီ)၊ Selenium (ဆယ်လ်နီယမ်) နဲ့ Sulfur compounds (ဆာလ်ဖါ) ဓါတ်ပေါင်းတွေလဲ ပါတာမို့ အားလုံးပေါင်းကနေ ကင်ဆာဖြစ်မှာကို တားဆီးနိုင်တယ်လို့ အာဟာရ သုတေသနက ယူဆတယ်။
Probiotics ဆိုတာ အစာလမ်းကြောင်းမှာ ရှိနေကြတဲ့ ဗက်တီးရီးယား အကောင်းတွေကို ခေါ်တယ်။ အစာခြေရာမှာ အသုံးကြတယ်။ ဒါ့အပြင် အစာတွေကနေ ကင်ဆာဖြစ်စေမှာကိုလဲ တားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဇီဝ-ဓါတုဗေဒလိုပြောရရင် b-glucuronidase နဲ့ Nitro-reductase ခေါ်တဲ့ (အင်ဇိုင်းမ်) တွေကနေ ကင်ဆာဖြစ်စေမှာမျိုး ပြောင်းလဲမသွားစေဘို့ရာ လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ခုခံအားစနစ် တခုထဲကနေ ဒီတာဝန်ယူနေရတာကို ဒါတွေကနေ အကူညီပေးတယ်။
စောစောပိုင်း သုတေသနတွေမှာ လူတွေစားသုံးတဲ့ အဆီကို အာရုံစိုက်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအချက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံလို့ မသင့်တာတွေ့ရတယ်။ အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ အာဟာရ မျှတတာနဲ့ ကြီးလာလို့ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာတာတွေကို အာရုံစိုက်လေ့လာကြတယ်။ Breast ရင်သား-ကင်ဆာ နဲ့ Colon အူမကြီး-ကင်ဆာတွေအတွက် ဖြစ်တယ်။ ငယ်ရွယ်တုံးမှာ ကိုယ်လက် လေ့ကျင်ခန်း-အားကစား မလုပ်တာဟာ အချက်တခုဆိုတာ သိလာရတယ်။
အသီးအနှံ၊ အသီးအရွက်တွေက ကောင်းတယ်ပေမဲ့ ချက်ပြုတ်တာမှာ ကြာကြာ ချက်တာ မကောင်းဘူး။ ဟင်းချက်တဲ့ထဲမှာ အရောအနှောတွေ များတာ မကောင်းဘူး။ ပင်ကိုယ်သဘာဝနဲ့ နီးလေလေ ကောင်းလေလေ။ Dairy products နို့ထွက်အစာတွေ၊ Fish ငါးတွေ နဲ့ Meat အသားတွေကို စားတာထဲက ၃ ပုံ ၁ ပုံထက် မများသင့်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သက်သတ်လွတ်စားပါလို့ မဆိုလိုပါ။ စက်နဲ့ ပြုပြင်ထားတာကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့စားပါ။ ဥပမာ ပန်းသီးဖျော်ရည်အစား ပန်းသီးကိုဘဲ စားပါ။
"အသီးအရွက် စားတာကနေ ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တယ် ဆိုတာဟာ လိုတာထက် ပိုပြောနေတယ်" လို့လဲ နောက် လေ့လာမှုတွေက ထောက်ပြလာတယ်။ Folic acid (ဖေါလစ်-အက်စစ်) က Breast ရင်သား-ကင်ဆာ နဲ့ Colon အူမကြီး-ကင်ဆာတွေအတွက် ကောင်းတယ်လို့ အဲဒီသုတေသနက ဆိုလာတယ်။ (ဖေါလစ်-အက်စစ်) အကြောင်း ရေးထားပါတယ်။ များတိုင်းလဲ မကောင်းပါ။
ကင်ဆာ ကာကွယ်ရေးအတွက် ကောင်းတဲ့ အစားအစာ စာရင်းထဲမှာ ဒါတွေလဲ ပါသေးတယ်။
- Soy ပဲပုတ်၊
- Vitamin E ဗီတာမင် (အီး)၊
- Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ)၊
- Flaxseeds နှမ်းတမျိုး၊
- Selenium (ဆဲလ်နီယမ်) ဓါတ်ပါတဲ့ အစာတွေ Nuts အစေ့အဆံ၊ Cereals ဆန်-ဂျုံ-ပြောင်း-ပြောင်ဖူး၊ Meat အသား၊ Mushrooms မှို၊ Fish ငါး၊ eggs ဥတွေ၊
- Green tea လဖက်ရည်ကြမ်း၊
- Organic (အော်ဂဲနစ်) အစာ ဒါမှမဟုတ် Local produce ဒေသထွက် အစာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် စားသုံးပါ။
• Lung Cancer and Papaya အဆုပ်-ကင်ဆာ နဲ့ သင်္ဘောရွက် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/lung-cancer.html ကိုလည်း တွဲဖတ်ပါ။
တကမ္ဘာလုံးမှာ ကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရသူပေါင်း နေ့စဉ် ၂ သောင်းရှိနေတယ်။ လူသေစာရင်းထဲမှာ ကင်ဆာနဲ့သေနေကြရတာ ၈ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ရှိတယ်။ တီဘီ၊ ငှက်ဖျားနဲ့ AIDS ကြောင့်သေဆုံးရသူစုပေါင်းတဲ့ဂဏန်းထက် ကင်ဆာနဲ့သေရသူက ပိုများတယ်။
ယောက်ျားတွေမှာ အဆုပ်ကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာတွေက အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်တယ်။ မိန်းမတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ဝ (ခေါင်း) ကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာတွေက အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်တယ်။
ရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးထဲမှာတယောက်ရှိရင်ဖြစ်လာနိုင်ခြေ နှစ်ဆရှိတယ်။ Pap smear စမ်းနည်းဟာ သားအိမ်ဝ (ခေါင်း) ကင်ဆာအတွက် တခုတည်းသော ကြိုတင်စမ်းနည်းဖြစ်တယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေမှာ မသောက်သူတွေထက် ၂၃ ဆ အဆုပ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်။
၂ဝဝ၈ စာရင်းအရ တကမ္ဘာလုံးမှာ ကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရသူပေါင်း ၇့၆ သန်းရှိခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူတွေရဲ့ ၁၃% ရှိပါတယ်။ ကင်ဆာနဲ့သေရတာအားလုံးရဲ့ ၇ဝ%ဟာ ဝင်ငွေမများတဲ့ တိုင်းပြည်တွေကဖြစ်တယ်။
- အဆုပ်ကင်ဆာ = ၁့၃၇ သန်း၊
- အစာအိမ်ကင်ဆာ = ၇၃၆ဝဝဝ၊
- အသဲကင်ဆာ = ၆၉၅ဝဝဝ၊
- အူမကြီးကင်ဆာ = ၆ဝ၈ဝဝဝ၊
- ရင်သားကင်ဆာ = ၄၈၅ဝဝဝ၊
- သားအိမ်ဝကင်ဆာ = ၂၇၅ဝဝဝ ယောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။
ချမ်းသာတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ကင်ဆာကြောင့်သေရတာထက် နှလုံးရောဂါနဲ့သေနေရတာက ပိုများတယ်။ မချမ်းသာတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ကင်ဆာကြောင့်သေရတာထက် ဝမ်းလျှောလို့သေနေရတာက ပိုများတယ်။
ကင်ဆာတိုင်းကို ပြည်တည်နာပေါက်တာမျိုးလို ပျောက်သွားအောင်ကုသလို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ ကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ၅ နှစ် အသက်ရှင်နှုန်းကိုသာ တွက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကင်ဆာအများစုကို စောစောသိလို့ စောစောဆေးကုသမှု စနစ်တကျခံယူလေ ရှင်နိုင်များလေလေဖြစ်တယ်။ တချို့ဆိုပျောက်တယ်လို့တောင် ပြောနိုင်လာပါတယ်။ စောစောသိအောင် ကြိုတင် ဆေးစစ်တာ လုပ်ဘို့ လမ်းညွှန်သစ်တွေလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ပညာရှင်တွေက မတူတဲ့အယူအဆတွေရှိတယ်။ နှစ်ကာလ ပြောင်းလာတာနဲ့လဲ လမ်းညွှန်သစ်တွေထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီစာမှာ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်ဝက်က ထုတ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းညွှန်ဟောင်း = ဆေးလိပ်သောက်သူတိုင်း လူအစုလိုက်စစ်ဆေးခြင်း (ဆခရင်လုပ်ခြင်း) က အကျိုးများစေတယ်။
လမ်းညွှန်သစ် = ၂ဝ၁၃ ကစပြီး USPSTF အဆိုအရ ဆေးလိပ်များများသောက်သူတွေ အသက် ၅၅ ကျော်ရင် CT scan လုပ်ပါ။
လမ်းညွှန်ဟောင်း = ယောက်ျား အသက် ၅ဝ ကျော်ရင် PSA test + Rectal exam လုပ်ပါ။ အသက် ၇၅ ကျော်ရင် မလို။
လမ်းညွှန်သစ် = USPSTF အဆိုအရ PSA test မလို။ Rectal exam အစာဟောင်းအိမ် (စအိုကတဆင့်) လက်ချောင်းထည့် စမ်းတာလုပ်ပါ။ ACS အဆို အသက် ၅ဝ ကျော်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။
လမ်းညွှန်ဟောင်း = လူအစုလိုက်စစ်ဆေးခြင်း (ဆခရင်လုပ်ခြင်း) ကိုအားပေးတယ်။
လမ်းညွှန်သစ် = USPFTF အဆို အဲလိုလုပ်ဘို့မလိုပါ။ အသားအရေဖြူသူတွေမှာ Melanoma အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများတယ်။ ACS အဆို ကိုယ့်ဖါသာ အရေပြားစစ်ကြည့်နေပါ။ ပြောင်းလဲမှုထူးခြားတာတွေ့ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
သားအိမ်ဝ (ခေါင်း) ကင်ဆာ
လမ်းညွှန်ဟောင်း = USPSTF အဆိုအရ အသက် ၂၁ နှစ်ကနေ ၆၅ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးတိုင်း Pap smear စစ်ဆေးတာ ၃ နှစ်တခါ လုပ်ပါ။
လမ်းညွှန်သစ် = လမ်းညွှန်ဟောင်းအတိုင်း လိုက်နာပါ။ USPSTF အဆိုအရ စစ်ဆေးမှုလုပ်ရတာနည်းချင်သူတွေ အသက် ၃ဝ ကနေ ၆၅ နှစ်ကြား Pap smear + HPV test တွဲပြီး ၅ နှစ်တခါလုပ်ပါ။
လမ်းညွှန်ဟောင်း = အသက် ၅ဝ ကျော်သူတိုင်း Colonoscopy ကိရိယာနဲ့စစ်ဆေးတာခံယူပါ။
လမ်းညွှန်သစ် = USPSTF အဆိုအရ အသက် ၅ဝ ကနေ ၇၅ နှစ်ရှိသူ ယောက်ျားမိန်းမတိုင်း အစုလိုက်စစ်ဆေးမှုခံယူပါ။ ၇၆ နှစ်ကျော်ရင်မလိုပါ။ မိသားစုရာဇဝင်မှာ အူမကြီးကင်ဆာရှိထားရင် စောပြီးစစ်ဆေးမှုခံယူပါ။
လမ်းညွှန်ဟောင်း = အသက် ၄ဝ ကျော်ရင် အမျိုးသမီးတိုင်း Memogram နှစ်စဉ်ရိုက်ပါ။
လမ်းညွှန်သစ် = ၂ဝဝ၉ ကစပြီး USPSTF အဆိုအရ အသက် ၅ဝ ကနေစပြီး Memogram ရိုက်ပါ။ ACS အဆိုအရ အရင်လမ်းညွှန်အတိုင်းသာလုပ်ပါ။ မိသားစုမှာ ရင်သားကင်ဆာရာဇဝင်ရှိသူတိုင်း ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။
ဆရာကျေးဇူးပြု၍ COLON CANCER အကြာင်းရှင်းပြပေးပါ။ ကျွန်တော့်အဖေမှာ ခွဲစိတ်ပြီး colon cancer stage2ဖြတ်ထုတ်ပြီး အလုံးရဲ့ နုတ်ခမ်းပတ်လည်မှာ cancer cell လွတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
Bowel cancer အူကင်ဆာလို့ ခေါ်တာဟာ Colorectal cancers ဖြစ်တယ်။ Colon cancer အူမကြီး-ကင်ဆာ နဲ့ Rectal cancer အစာဟောင်းအိမ်-ကင်ဆာကို ပေါင်းခေါ်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ တတိယမြောက် နဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ စတုတ္ထမြောက် အဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာဖြစ်တယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ငံတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ ၆ဝ% ရှိတယ်။ ၂ဝဝ၈ လေ့လာမှုအရ တကမ္ဘာလုံးမှာ လူနာသစ်ပေါင်း ၁့၂၃ သန်းရှိပြီး၊ ၆ သိန်းကျော် သေဆုံးရတယ်။ အူသိမ်မှာ ကင်ဆာဖြစ်တာ ရှားတယ်။
Colon cancer အူမကြီး-ကင်ဆာ အများစုက ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ Polyps အသားပိုကနေစတယ်။ ဖြစ်ကာစမှာ အူမကြီးရဲ့ အတွင်းဆုံးလွှာကနေဖြစ်ပြီး စောစောမသိလို့ ဆေးမကုရင် အူမကြီးရဲ့ ကြွက်သားလွှာအထိ ရောက်လာမယ်။ နောက် ဆက်ပြန့်မယ်။ အူနံရံမှာသာ ဖြစ်နေသေးရင် ကုရတာလွယ်တယ်။ ရောဂါဗေဒအရပြောရရင် ၉၅% က Adenocarcinoma အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကျန်တာက Lymphoma နဲ့ Squamous cell carcinoma အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။
• အသက်ကြီးမှ ဖြစ်တာများတယ်။
• ယောက်ျားတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။
• အမျိုးထဲမှာ တယောက်မက ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၇၅-၉၅% ဟာ မျိုးဗီဇနဲ့ မပတ်သက်တာ တွေ့ရတယ်။
• လူနေမှုပုံစံ (အစားအသောက်၊ အရက်သောက်၊ ဆေးလိပ်သောက်) ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Inflammatory bowel disease (Ulcerative colitis and Crohn's disease) ရှိနေသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။
- Crohn's disease ရှိသူထဲက ၁ဝ နှစ်အတွင်း ၂%၊ ၂ဝ နှစ်အတွင်း ၈% နဲ့ ၃ဝ နှစ်အတွင်း ၁၈% အူမကြီး-ကင်ဆာ လာဖြစ်တယ်။
- Ulcerative colitis ရှိနေသူထဲက ၂ဝ% ဟာ ၁ဝ နှစ်နေရင် အူမကြီး-ကင်ဆာဖြစ်လာတယ်။
Diagnosis ရောဂါသေခြာအောင် Sigmoidoscopy or Colonoscopy စမ်းရင်းနဲ့ Tumor biopsy အသားစ ဖြတ်ယူ စစ်ဆေးတာ လုပ်ရတယ်။ Barium enema စအိုကနေ ဆေးသွင်းပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်တာလဲ လုပ်တယ်။ ရောဂါ ဘယ်အထိ ပြန့်နေသလဲ သိအောင် CT scan လုပ်ရတယ်။ Virtual Colonoscopy နောက်ပေါ်နည်းဖြစ်တယ်။ အူမကြီးကို 3-D model CT scan images ပုံတွေ မြင်ရအောင် လုပ်တယ်။ အူထဲကို ကင်မရာထည့်နေစရာမလိုဘူး။ တခုရှိတာက Polyps တွေ့ရင် တခါတည်းခွဲထုတ်လို့ မရတာမို့ Colonoscopy လုပ်ပြီး ထုတ်ရလိမ့်မယ်။
အူမကြီးဆိုတာ ညာဘက်အထက်တန်းနေတာ၊ ကန့်လန့်တန်းနေတာ နဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်တန်းနေတာဆိုပြီး ရှိတယ်။ ညာဘက်ဖြစ်တာမျိုးက အူလမ်းပိတ်တာ ဖြစ်ခဲတယ်။ သွေးယိုရာကနေ သွေးအားနည်းနေတာ များတယ်။ ဘယ်ဘက်က ဖြစ်တာ ဆိုရင် အူလမ်းပိတ်တတ်တယ်။
• အထဲမှာ ရောဂါစနေပေမဲ့ ဘာမှမခံစားရဘူး။ ဒါကြောင့် သိရင် နောက်ကျနေတတ်တယ်။
• သိသာတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက
- စအိုကနေ သွေးယိုမယ်၊ ဝမ်းသွားရင်း သွေးပါမယ်။
- ကြာတော့ သွေးအားနည်းလာမယ်။
- လူက ပိန်လာမယ်။ အားယုတ်မယ်။
- ဝမ်းသွားရတာ အရင်လိုမဟုတ်တာဖြစ်မယ်။ ဝမ်းချုပ်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာတွေ ဖြစ်မယ်။ ဝမ်းချုပ်တာ များတယ်။ ဝမ်းသွားပြီးပေမဲ့ မကုန်သေးသလို ခံစားရနိုင်တယ်။
- အစားအသောက် ပျက်မယ်။
- ပျို့-အန်ချင်တာ ဖြစ်မယ်။ ဗိုက်အောင့်၊ လေထိုး အနေရဆိုးတယ်။
Risk factors ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာ သတိထားရမလဲ
• Older age ကင်ဆာ ၉ဝ% ဟာ အသက် ၅ဝ ကျော်တွေဖြစ်တယ်။
• Colorectal polyps ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အသားပိုရှိနေသူ။
• Ulcerative colitis and Crohn's disease ရောဂါရှိနေသူ၊
• Inherited syndromes မျိုးရိုးရှိသူ။
• Low-fiber, high-fat diet အဆီများများစားပြီး အသီးအနှံစားနည်းသူ။
• A sedentary lifestyle ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှု နည်းသူ။
• Diabetes ဆီးချိုရှိသူ။ Obesity ကိုယ်ခန္ဓာဝသူ။
• Smoking ဆေးလိပ်သောက်သူ။ Alcohol အရက်သောက်သူ။
• Radiation therapy for cancer ကင်ဆာတခုခုအတွက် ဓါတ်ကင်ရသူ။
Stages of colon cancer အဆင့်ခွဲခြားခြင်း
အဆင့် (ဝ) = အူအတွင်းဆုံးအလွှာမှာသာရှိနေသေးတယ်။
အဆင့် (၁) = အူနံရံမှာသာရှိနေသေးတယ်။
အဆင့် (၂) = အူ ကြွက်သားမှာသာရှိနေသေးတယ်။
အဆင့် (၃) = အူအနားက တက်စေ့ကိုရောက်နေယုံသာရှိသေးတယ်။
အဆင့် (၄) = တခြားနေရာတွေအထိရောက်နေပြီ။
Treatments and drugs ဘယ်လိုကုသမလဲ
• Surgery for early-stage colon cancer စောသေးတာအတွက် ခွဲစိတ်ကုသနည်း။
အသားပိုအဆင့်သာ ရှိသေးမယ်၊ ကင်ဆာကသေးမယ်၊ နေရာတခုလေးမှာသာ ကွက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်မယ်။ Colonoscopy ကရိယာနဲ့ စစ်ဆေးရင်း လုပ်မယ်။ Colorectal Cancer Surgery ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်တာဟာ အတော် အောင်မြင်တယ်။ တခြားနေရာတွေအထိ ရောက်နေရင်တော့ ခက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန့်နေတဲ့နေရာကလဲ ခွဲထုတ်ရတာဆိုရင် အကျိုးရှိတယ်။
• ရောဂါအဆင့် နောက်ရောက်နေပေမဲ့လဲ ကုသလို့ ထိရောက်တာတွေ ရှိတယ်။ Surgery ခွဲစိတ်ကုသတာ၊ Radiation ဓါတ်ကင်တာ နဲ့ Chemotherapy ဆေးပေးကုတာတွေကို တွဲပြီး ကုသပေးမယ်။ သက်သာနေပြီးသာ ထပ်ဖြစ်တာကိုကုရတာ အတော်ခက်တယ်။ ဒါကိုလဲ Radiation နဲ့ Chemotherapy တွဲလုပ်ပေးရင် အသက်ပိုရှည်စေမယ်။
• အရွယ်အစားပိုကြီးတာဆိုရင် Laparoscopic surgery ကရိယာသုံးပြီး ခွဲထုတ်မယ်။
• Surgery for invasive colon cancer နောက်ကျတဲ့ ကင်ဆာကို ခွဲစိတ်နည်း။ Partial colectomy ဖြစ်နေတဲ့နေရာက်ို ဖြတ်ထုတ်မယ်။ ဘေးက ကောင်းနေသေးတဲ့ နေရာကိုပါ ထုတ်မယ်။ တက်စေ့လဲ ထုတ်မယ်။ ထိပ်စနှစ်ဘက်ကို ဆက်ပေးလို့ရရင် ဆက်ပေးမယ်။
• ဒါမှမဟုတ် ဝမ်းသွားလမ်းကို ဗိုက်ကနေအသစ်လုပ်ပေးမယ်။ တခါတလေ Temporary colostomy ယာယီ အဲလိုလုပ်ရပြီး။ တခါတလေ Permanent colostomy ရာသက်ပန် လုပ်ပေးရတယ်။
• နောက်ကျနေတဲ့ အူလမ်းပိတ်နေတဲ့ ကင်ဆာဆိုရင် အူလမ်းပွင့်အောင် ခွဲစိတ်တာလုပ်မယ်။ ရောဂါကို တိုက်ရိုက် ကုတဲ့သဘောတော့ မဟုတ်ဘူး။
• တကယ်လို့ အသဲအထိ ရောက်နေတာ တွေ့ရပေမဲ့ လူက ခံနိုင်ရည်ကောင်းနေရင် ကူးစက်နေတဲ့နေရာက ကင်ဆာ အကျိတ်ကို ထုတ်ပေးမယ်။
• Chemotherapy ဆေးပေးကုသနည်းကို ခွဲစိတ်တာ မလုပ်ခင်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပြီးမှဖြစ်ဖြစ် တွဲလုပ်တာလဲရှိတယ်။ ကင်ဆာ (ဆဲလ်) တွေကို သေစေဘို့ဖြစ်တယ်။ Radiation therapy ဓါတ်ကင်တာနဲ့ တွဲပေးရတာလဲ ရှိတယ်။ 5-flourauracil ဆေးကိုသုံးတာ များတယ်။ ဆေးပေးကုသရတာ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေတော့ ခံရမယ်။ နောက်ပေါ်ဆေးတွေက ပိုကောင်းလာပါတယ်။
• Radiation therapy ဓါတ်ကင်တယ်ဆိုတာ X-rays ဓါတ်မှန်ရောင်ခြည်နဲ့ ကင်ဆာ (ဆဲလ်) တွေကို သေစေတာဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ်ထုတ်ပေမဲ့ ကျန်နေနိုင်တာကို သေစေမယ်။ အရွယ်အစားကိုလဲ သေးစေလို့ ပိတ်နေတာ၊ ဖိနေတာရှိရင် သက်သာစေမယ်။ ရောဂါ စောစောပိုင်းအဆင့်အတွက် မသုံးဘူး။ ခွဲစိတ်တာ၊ ဆေးပေးတာ နဲ့ ဓါတ်ကင်တာ တွဲလုပ်ရတာတွေလဲရှိတယ်။
• Targeted drug therapy ဆေးပေးနည်းတမျိုးလဲရှိတယ်။ ရောဂါ နောက်ပိုင်းရောက်နေသူတွေအတွက် Bevacizumab (Avastin), Cetuximab (Erbitux) and Panitumumab (Vectibix) ဆေးတွေကိုသုံးတယ်။
• Radiofrequency Ablation (RFA) နည်းဆိုတာ CT scan သုံးပြီး အပူလှိုင်းသုံးပြီး ကင်ဆာအကျိတ်ကို ဖျက်ဆီးပေးတယ်။ ခွဲစိတ်မရတာမျိုးကို လုပ်ပေးတယ်။ အသဲကိုရောက်နေသူဆိုရင် (RFA) နည်းနဲ့ Chemotherapy နည်းတွဲလုပ်မယ်။
• ရောဂါ ဘယ်လောက်စေစောသိသလဲ။ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ကုသမှုခံယူသလဲအပေါ်မူတည်တယ်။
• အူမကြီးနံရံမှာသာဖြစ်နေသူက ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူလိုက်ရင် အသက်ကြာကြာရှင်ဘို့ ၈ဝ% ရှိမယ်။
• နောက်ကျမှသိရ-ကုရသူဆိုရင် ၅ နှစ်သက်တမ်းနေနိုင်မှု ၁ဝ% ရှိမယ်။
• ကင်ဆာက တက်စေ့တွေအထိ ရောက်နေသူတွေမှာ ၅ နှစ်သက်တမ်းနှုန်း ၆၅% ရှိတယ်။
• တခြားအင်္ဂါတွေအထိ ရောက်နေသူတွေမှာ ၈% ရှိတယ်။
• နောက် လေ့လာမှုတခုအရ အဆင့် (၁) = ၅ နှစ်သက်တမ်းရှည်နှုန်း ၇၄%၊ အဆင့် (၄) = ၆%၊
• ဖဲကြိုးပြာဟာ ဒီရောဂါအတွက် သတိပေးချက်ဖြစ်တယ်။
• အူမကြီးကင်ဆာက Warning Signs သတိမပေးတတ်ပါ။ စောစောသိအောင်လုပ်ပါ။
• Digital rectal examination စအိုလမ်းကို စမ်းသပ်ခြင်း နဲ့ Stool occult blood test ဝမ်းထဲမှာ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရတဲ့သွေး ပါနေ-မနေ စစ်ဆေးတာ လုပ်ရမယ်။ ဝမ်းထဲမှာ အဲလိုစစ်မှ သွေးတွေ့သူတွေထဲက ၃ဝ-၄၅% ဟာ Colon polyp အသားပိုအဆင့် နဲ့ ၃-၅% ဟာ Colon cancer ကင်ဆာ ရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။
• Stool occult blood အပေါင်းပြသူတွေကို Barium enema x-rays, Colonoscopies တွေဆက်လုပ်ရမယ်။
• ဝမ်းထဲသွေး ပါ-မပါစစ်လို့ အနုတ်ပြတိုင်းလဲ ကင်ဆာ မရှိဘူးလို့ အသေအခြာ မပြောနိုင်သေးဘူး။ ၂ဝ% လောက်မှာ အဲလိုဖြစ်တယ်။
• ဝမ်းသွေးစစ်တာ အောင်ပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေစာရင်းထဲပါနေသူတွေကို Flexible sigmoidoscopies or Colonoscopies တွေပါ လုပ်သင့်တယ်။
• အသက် ၅ဝ ကျော်ရင် ၃-၅ နှစ်တခါလုပ်ဘို့ လမ်းညွှန်တယ်။
• Genetic counseling and testing မျိုးဗီဇစစ်ဆေးနည်းတွေ အသစ်ပေါ်လာပြီ။ သွေးစစ်တာပါ။ FAP, AFAP, MYH, and HNPCC တွေရှိသူတွေကို Hereditary colon cancer syndromes လို့ခေါ်တယ်။
• Diet and colon cancer အူမကြီးကင်ဆာနဲ့ အစားအစာ
- အဆီလျှော့ပါ။ အသား၊ ဥ၊ နို့ထွက်အစားအစာတွေ၊ စားသုံးဆီတွေကနေ ရတာတွေကို လျှော့ပါ။
- Fiber (ဖိုက်ဘာ) ဆိုတာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံတွေ၊ အဖြူဆွတ်နေအောင် လုပ်မထားတဲ့ ဆန်-ဂျုံမှုံ့တွေနဲ့ လုပ်တဲ့ အစာတွေက ရတယ်။ (ဖိုက်ဘာ) က ကျေချက်-ပျော်ဝင်မသွားနိုင်ဘူး။ ဝမ်းထဲမှာ အတိုင်းသားလို ပါနေမယ်။ အစာထဲက Potential carcinogens ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တာတွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးမယ်။ ဝမ်းသွားလွယ်စေလို့ အဲလိုဓါတ်တွေ အထဲမှာ ကြာကြာမနေစေနိုင်ဘူး။
- အစားအစာ ဆင်ခြင်တာကြောင့် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်မှာကို ၄၅% သက်သာစေမယ်။
- Exercise ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားနေသူတွေက အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်မှာကို ၂၄% သက်သာစေမယ်။
• ပြောပြောနေကြရတဲ့ ၂ဝ၁၅ ရောက်ပါပြီဗျား။
• ၉ လလွန် ၁ဝ လဖွါး၊ လိုချင်တာရမလားတော့ ပြောမရသေးပါ။ အင်္ဂါစုံ-မစုံဆိုတာ ကြိုမတွေးကောင်းပါ။
• မိစစ်-ဖစစ်ဆိုတာကို ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ ရေးထားရတာမျိုးမဟုတ်ပါ။
• ကိုယ်ဝန်ကို (လူထုလက်) အပ်ပါ။ မှန်မှန်ပြသနေပါ။
• ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အားဆေးလဲသောက်ပါ။ သံဓါတ်ဆိုတာ ကြေးနီထက်မာကြောတယ်။
• ကာကွယ်ဆေးတွေလဲ မှန်မှန်ထိုးပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေက တော်တော့ရောဂါတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြတယ်။
• အစာအဟာရ မျှတလုံလောက်အောင် စားသုံးပါ။ ပြည်တွင်းအစားအစာထက် ပိုကောင်းတာမရှိပါ။ တရုပ်စာ၊ ကုလားစာ၊ ထိုင်းစာတွေနဲ့ မသင့်ပါ။
• ၂ဝ၁၅ ဖွါးမဲ့ ရင်သွေးရတနာ ရိုးရိုးမွေးလို့ရပါစေ။ ခွဲမွေးပေးနိုင်တဲ့ဆရာဝန်တွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ မလိုအပ်ပဲ ခွဲမွေးတာတော့ အားမပေးပါ။
• ဆရာဝန်နဲ့ လက်သည်ချည်းလဲ အားမကိုးပါနဲ့။
• မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ တမ်းချင်း၊ ကျွန်တော့်ဆီကပို့တဲ့ လွမ်းချင်း၊
• လူချင်းက မမြင်ဘူးကြပေမဲ့ ရင်ချင်းကအတူတူ၊
• မြူနှင်းထူဆောင်းလ၊ ဖုန်သဲထူနွေလ၊ ချောင်းရေကျမိုးလတွေမှာ၊
• ဝေဒနာသည်တွေကိုကုစား၊ စေတနာမေတ္တာတွေကို ရယူခံစား၊
• ၁၉၉ဝ မှာ ဆန္ဒမဲပြားတွေကို ပေးအပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဆရာဝန်တယောက်၊
• အနောက်ကမ္ဘာ ရောက်ကာနေရတာမို့ တခေါက်တခါ အရောက်သာပြန်လှည့်ပါလို့၊
• တယောက်မကပါ ဖိတ်စာပို့လာကြ၊
• မရိုးမရွနဲ့ ခြေမကြွနိုင်သေးခင်၊
• မေတ္တာရေစင်သာ အရင်ပို့နိုင်သေးရဲ့၊
• ဘေးမခရန်မသီ၊ မြန်ပြည်သားများစုံအညီ၊
• နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ တလုံးတဝပြည့်ကြစေချင်သည်။ ။
• အမျိုးသမီးတွေရာသီဆင်းတာနဲ့ဆိုင်တဲ့ အရာပေါင်း ၄ဝဝဝ ကို ပြထားထားခဲ့တယ်။ ပြတိုက်ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စုဆောင်းထားတာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ရောက်ခဲ့ဘူးသူတယောက်က ပြန်ရေးတာမှာ အသက် ၅ဝ လူပျိုကြီး Harry Finley (ဟယ်ရီ ဖင်လေး) ဆိုသူက အထက်ထပ်မှာနေပြီး လာမေးသူတွေကို စုဆောင်းထားတာတွေကို ဖွင့်ပြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• Lower trunk mannequins အောက်ပိုင်းအဝတ်အစားရုပ်တုတွေထဲမှာ ရာသီလာစဉ်ဝတ်ဆင်တဲ့ အဝတ်အစား အမျိုးမျိုး၊ Tampons ရာသီလာစဉ်သုံးတဲ့ခွက်အမျိုးမျိုး၊ US Army tampon ကနေ Commercial tampons ကနေ့ခေတ် ရောင်းကုန် အထိပြထားတယ်။ ရာသီလာချိန်မှာစားလေ့ရှိတဲ့အစားအသောက်လဲပါတယ်။ PMS Crunch ခေါ်တယ်။ အနုပညာပစည်းတွေ၊ စာသားတွေနဲ့ ပစ္စည်းတွေစုံတယ်။
• ဥရောပကနေလဲ စုဆောင်းထားတယ်။ ပန်းချီတွေလဲပါတယ်။ ၁၈၆၇ တုံးက တီထွင်ထားတဲ့သတ္တု + ဝိုင်ယာ တွေနဲ့လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကို မှတ်ပုံတင်ထားသူက အမျိုးသားတဦးဖြစ်တယ်။
• စာတွေထဲမှာ Tampon safety legislation ဥပဒေ၊ Menstrual product safety ထုတ်ကုန်စိတ်ချရမှု၊ History of tampons and menstrual cups ရာသီသုံးပစ္စည်းတွေသမိုင်း၊ Feminine hygiene products အမျိုးသမီး သန့်ရှင်းရေး ထုတ်ကုန်များ၊ ဥပမာ ခါးပတ်၊ ဆေးကြောရည်၊ ဖြန်းဆေး၊ အခုအခံ၊ အတွင်းခံ စတာတွေပါတယ်။ ကုပ္မဏီကြော်ညာတွေ၊ လမ်းညွှန်စာတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေလဲပါတယ်။
• Menstrual huts ရာသီတဲ ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရာသီလာချိန်မှာ တခြားလူတွေနဲ့ မရောစေဘဲ သီးခြား နေကြရတဲ့နေအိမ်လေးကို ခေါ်တယ်။
• ရာသီဖြစ်စဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အရေးအသား Bibliography of monographs, Essays and Articles တွေလဲပါတယ်။
• သူဟာ Britannica Internet Guide Award, Lycos Top 5% Award, Miningco's Best of the Net Award ဆုတွေရထားသူဖြစ်တယ်။
• ဟယ်ရီက စနစ်တကျစုဆာင်းထားသလို သူ့ပြတိုက်ကိုလာကြည့်သူတွေဟာလဲ ၉၅% ဟာ ပညာတတ်သူတွေလို့ ဆိုပါတယ်။
• ဓါတ်ပုံဟာ Menstrual cup dress ရာသီလာစဉ်ဝတ်ဆင်ရတဲ့အဝတ်အစားတခုပုံဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီး အင်္ဂါရောင်တာကို တိတိကျကျပြောရရင် Vulvovaginitis (ဗဂျိုင်းနား + မိန်းမကိုယ်) ရောင်ခြင်း ဖြစ်တယ်။
သိသာတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ -
1. Vulvar itching မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်း၊
2. Vaginal discharge ဗဂျိုင်းနားက တခုခုဆင်းခြင်း နဲ့
3. Vaginal odor ဗဂျိုင်းနားက အနံ့ထွက်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်။
Acute vulvovaginitis ရုတ်တရက်-ရက်တို မိန်းမကိုယ် နဲ့ ဗဂျိုင်းနား ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတာတွေကတော့ -
- Infections ရောဂါပိုးဝင်တာ၊
- Irritant or allergic contact မသင့်တာ၊ မတည့်တာနဲ့ ထိတွေ့မိတာ နဲ့
- Atrophic vaginitis အသက်ကြီးလာလို့ ဖြစ်ရတဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း ပါးလာတဲ့ ဇရာဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်တယ်။
Infections ရောဂါပိုးဝင်တာ အများဆုံး (၃) မျိုးကနေဖြစ်စေတယ်။
1. Bacterial vaginosis ဗဂျိုင်းနားရောင်ခြင်းဆိုတာ ဗဂျိုင်းနားမှာ ရှိနေကြပိုးတွေ အခြေအနေပြောင်းသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့ Gardnerella vaginalis (ဂါ့ဒ်နီရဲလား ဗဂျိုင်နိုက်တစ်)၊
2. Candida albicans (ကင်ဒီဒါ အယ်လ်ဘီကန်) ပိုးကနေဖြစ်စေတဲ့ Candidiasis (ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ်) နဲ့
3. Trichomonas vaginalis (ထွိုင်ကိုမိုးနပ်စ် ဗဂျိုင်နယ်လစ်) ကနေဖြစ်စေတဲ့ Trichomoniasis (ထွိုင်ကို မိုနီယေးဆစ်) တွေဖြစ်တယ်။
Infectious vulvovaginitis ရောဂါပိုးကြောင့် ဗဂျိုင်းနားရောင်တာမျိုးက Sexually active women လိင်မှုရေးရာ တက်ကြွမှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်ပြီး Candidiasis (ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ်)၊ မတည့်တာနဲ့ ထိတွေ့လို ဖြစ်တဲ့ Contact vaginitis (ကွန်တက် ဗဂျိုင်နိုက်တစ်) နဲ့ အသက်ကြီးမှဖြစ်တဲ့ Atrophic vaginitis (အထောဖစ် ဗဂျိုင်နိုက်တစ်) တွေကတော့ လိင်နဲ့ မဆိုင်ဘဲ ဖြစ်တယ်။
- Gynecological and sexual history သားဖွါးမီးယပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့၊ လိင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါရာဇဝင် အားလုံး မေးရမယ်။
- သန့်ရှင်းလုပ်ရာမှာ ဆပ်ပြာ၊ ဆေးရည် စတာမှာ ဘာတွေသုံးသလဲ မေးရမယ်။ လိုတာထက်ပိုသုံးသူတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တတ်တယ်။
- STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါရှိပြီး အသေအခြာကုသရဲ့လားမေးမယ်။
- Unprotected sexual intercourse လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အကာအကွယ် ပါ-မပါလဲ မေးရမယ်။
- Pelvic examination မွေးလမ်းကြောင်း စစ်ဆေးတာ လုပ်ရမယ်။ Discharge ဆင်းတာ၊ Odor အနံ့၊ Ulcerations အနာ၊ Cervical abnormalities သားအိမ်ဝ အခြေအနေ၊ Cervical discharge သားအိမ်ဝက ဘာဆင်းသလဲ၊ Cervical motion or adnexal tenderness to palpation သားအိမ်ဝကို ထိ-ဖိရင် နာသလား။
- Urine pregnancy test ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ ဆီးစစ်တာလဲလုပ်ရမယ်။
- Discharge pH determination ဆင်းနေတာရဲ့ အက်စစ်ဓါတ်၊
- Examination ofawet mount ဆင်းနေတာကို ဓါတ်ခွဲခမ်းမှာ စစ်ဆေးခြင်း၊
- PID တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေ ရောင်တာကို သံသယရှိရင် Dirty or initial-stream urine sample ထွက်ထွက်ခြင်းခံထားတဲ့ ဆီးထဲမှာ Gonorrhea (ဂနိုရီးယား) နဲ့ Chlamydia (ကလာမိုင်ဒီးယား) ပိုးတွေကို စစ်ရမယ်။
- Endocervical samples သားအိမ်ဝ နမူနာ ယူပြီးလဲ Gonorrhea (ဂနိုရီးယား) နဲ့ Chlamydia (ကလာမိုင်ဒီးယား) ပိုးတွေကို စစ်နိုင်တယ်။
- Midstream urine ထွက်ထွက်ခြင်းခံထားတဲ့ ဆီးမဟုတ်ဘဲ ဆီးသွားနေတုံး အလည်ပိုင်းမှာခံယူတဲ့ ဆီးကို Urinary tract infection ဆီးလမ်းပိုး ရှိ-မရှိ စစ်နိုင်တယ်။
Treatment Recommendations ဘယ်လိုကုသမလဲ -
1. Bacterial vaginosis ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဗဂျိုင်းနားရောင်ခြင်း
- First-line treatment options ပဌမဦးစားပေးဆေး
• Metronidazole 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။
• Metronidazole gel 0.75% မွေးလမ်းကြောင်းထဲ တညတခါ၊ ၅ ရက်ထည့်ပါ။
• Clindamycin cream 2% မွေးလမ်းကြောင်းထဲ တညတခါ၊ ၇ ရက်ထည့်ပါ။
- Alternatives ဒုတိယဦးစားပေးဆေး
• Clindamycin 300 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။
• Clindamycin ovules 100 mg တည တကြိမ် ၃ ခါ သွေးပြန်ကြောထဲထိုးပါ။
2. Candidiasis (ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ်)
• Fluconazole 150-mg တခါတည်းသောက်ပါ။
• Butoconazole 2% cream မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ၃ ရက်ထည့်ပါ။
• Butoconazole 2% cream မွေးလမ်းကြောင်းထဲ တခါတည်းထည့်ပါ။
• Clotrimazole 1% cream မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ၇-၁၄ ရက်ထည့်ပါ။
• Miconazole 2% cream မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ၇ ရက်ထည့်ပါ။
• Miconazole 200 mg vaginal suppository မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ၃ ရက်ထည့်ပါ။
• Miconazole 1200 mg vaginal suppository မွေးလမ်းကြောင်းထဲ တခါတည်းထည့်ပါ။
• Nystatin 100,000 unit vaginal tablet မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ၁၄ ရက်ထည့်ပါ။
• Tioconazole 6.5% ointment မွေးလမ်းကြောင်းထဲ တခါတည်းထည့်ပါ။
3. Genital herpes လိင်လမ်းရေယုံ
• Acyclovir 400 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇-၁ဝ ရက်သောက်ပါ။
• Acyclovir 200 mg တနေ့ ၅ ကြိမ်၊ ၇-၁၄ ရက်သောက်ပါ။
• Famciclovir 250 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇-၁ဝ ရက်သောက်ပါ။
• Valacyclovir 1 g တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၇-၁ဝ ရက်သောက်ပါ။
4. Pelvic inflammatory disease တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများရောင်ခြင်း
• Levofloxacin 500 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ (ဆေးယဉ်လာလို့ တချို့နေရာတွေမှာ မသုံးတော့ပါ)
• Ofloxacin 400 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ (ဆေးယဉ်လာလို့ တချို့နေရာတွေမှာ မသုံးတော့ပါ)
• အဲဒီဆေးနဲ့အတူ တွဲဘို့လိုရင် Metronidazole 500 mg days တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။
• Ceftriaxone 250 mg IM တခါတည်းထိုးပါ + Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက် သောက်ပါ။
• Cefoxitin2g IM တခါတည်းထိုးပါ + Probenecid 1 g တခါတည်းသောက်ပါ + Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။
5. Trichomoniasis (ထွိုင်ကို မိုနီယေးဆစ်)
• Metronidazole2g တခါတည်းသောက်ပါ။
• Tinidazole2g တခါတည်းသောက်ပါ။
- Alternative ဒုတိယဦးစားပေးဆေး
အမျိုးသမီးတိုင်းကို Pap smear လုပ်ဘို့ တိုက်တွန်းရမယ်။ ၂၁ နှစ်ကနေ ၃ဝ အထိရှိသူတွေ တနှစ်တခါ၊ အသက် ၃ဝ နဲ့ ၆၅ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးမှာ Pap Test နဲ့ HPV Test တွေက ကောင်းနေရင် ၅ နှစ်တခါ စစ်ပါ။
Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-itching.htm
Vaginal itching မိန်းမကိုယ် ယားခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vulvovaginitis.html
Vulvovaginitis အမျိုးသမီးအင်္ဂါ ရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-itching.html
၁။ ဆရာခင်ဗျား အညာမှာ ဖုန်ထူညစ်ပတ်လို့ ကျနော်အမျိုးသမီးခြေထောက်မှာ ခြင်ကိုက်ဖုကို ကုတ်မိရာကနေ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီး ဝဲနှင်းခူ (အစို) ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတွေသွားပြီး ဆေးထိုးဆေးစား တာလည်း မပျောက်ဘူးခင်ဗျာ။ နောက်ထပ် တိုက်နယ် ဆေးရုံသွားပြီး ဆေးထိုးတာလည်း မပျောက်ပါခင်ဗျာ။ အဖုအပိန့်တွေ ပေါက်လာတာပဲ အဖတ်တင်တယ်ဆရာ။ တိုက်နယ်ဆေးရုံက ဆရာမက SIVKORT ထိုးဆေးနဲ့ နှင်းခူ ဘေးပတ်လည်ကို ထိုးရင် ပျောက်တယ်လို့ပြောလို့ ဝယ်လာတယ်ဆရာ။ SIVKORT ဆေးထိုးရင်ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ရှိမလားဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။
Sivkort ဆိုတာ Triamcinolone ဆေးဖြစ်တယ်။ လိမ်းဆေး-ထိုးဆေးရှိတယ်။ နေရာအမျိုးမှိုးမှာသုံးတယ်။ အလာဂျီရတာ၊ နှင်းကူနာ SIVKORTအမျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်။ လိမ်းတဲ့နေရာ အရေပြား ခြောက်သွေ့မယ်။ ကွဲအက်မယ်။ ဝက်ခြံပေါက်မယ်။ ပူလောင်မယ်။ အရေပြားအရောင်ပြောင်းမယ်။ ဗက်တီးရီးယား ဝင်လာနိုင်တယ်။
၂။ ကျနော့်အသက် ၂၃ နှစ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၃ ဒီဇင်ဘာလမှာ အက်ဆီးဒင့်တခုကြောင့် ကျနော့် ဘေလုံး (စပလင်း) ခွဲထုတ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါအကြောင့် ကျနော် စိတ်အရမ်းညစ်ရပါတယ်ဆရာ။ အခုဆိုရင်တနှစ်ပြည့်ပါပြီခင်ဗျာ။ တနှစ်ကိုတခါ တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ငါးနှစ်ကိုတကြိမ် ဘေလုံးအတွက် ဆေးထိုးရမယ်လို့လဲ ဆရာဝန်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ် ဆရာခင်ဗျာ။ ကျနော်သိချင်တာက ဘေလုံး မရှိတော့တဲ့ သူတယောက်အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ နေထိုင်ဖို့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို အထူးသိချင်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ သာမန်လူတယောက်လို သက်တမ်းစေ့နေနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုလည်း အမှန်အတိုင်း သိချင်လှပါတယ်ဆရာ။ ပြီးတော့ ကျနော်ဟာ လူလွတ်တယောက်ပါ ဘေလ်မရှိတဲ့လူတယောက်က အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်လည်း သိချင်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပင်းပန်းတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလုပ်လို့ရပါသလား၊ ဒိုက်ထိုးဘားဆွဲ ဘောလုံးကန်စတဲ့ အားကစားတွေကော လုပ်လို့ရပါသလား သိချင်လှပါတယ်ဆရာ။ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း တခါတလေစားမိပါတယ်ဆရာ။ အသောက်အစားကတော့ တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ပါတယ်ဆရာ။
ဘေလုံးထုတ်ထားသူ အသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဘေလုံးကအလုပ်တွေလုပ်ပေးနေတာတော့ရှိလို့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်စရာတွေတော့ရှိတယ်။ ဗက်တီးရီးယားကို တိုက်ထုတ်ပေးလို့ ရောဂါပိုးဝင်မှာကိုသတိထားရမယ်။ Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitides နဲ့ Haemophilus influenza ပိုးတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ကနေ နူမိုးနီးယား၊ ဦးနှောက်အမှေးရောင်စတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတွေရစေနိုင်တယ်။ (ခြောက်တယ်လို့ မထင်မှတ်စေလိုပါ။) ကာကွယ်ဆေး ရှိတာတွေထိုးထားပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ ဆရာရှင့် သမီးတို့မြို့မှာ double crane လင်ဇီးဆေး မိတ်ဆက်ပွဲလေးကျင်းပခဲ့ပါတယ် အဲဒီကဆေးဝါးတွေထဲက ဂါနိုဒါးမားလင်ဇီးရယ် ပိုလန်နဲ့ ကယ်စီယမ်ဆေးပြားရယ်ဟာ သမီးတို့လို ရေအိတ်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင့်။ ဆရာရဲ့အကြံပေးချက်လေးကိုလဲသိချင်ပါတယ်။
ကြော်ညာဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ရေအိတ်ကိုပျောက်မယ်လို့တော့ မထင်ပါ။ ပိုလန်ခေါ် ပန်းဝတ်မှုံအကြောင်း စာတပုဒ် ရေးထားတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်အကြောင်းလဲရေးထားပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် လိုအပ်ချက်မတူကြပါ။ ကိုယ်လိုတာကိုသာဖြည့်ဆီးရပါမယ်။
- Bee pollen ပန်းဝတ်မှုံ အာဟာရ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bee-pollen_19.html
- Bee pollen granules ပျားကနေထုတ်တဲ့ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bee-pollen-granules_19.html
- Calcium blood test (ကယ်လ်စီယမ်) စစ်ဆေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/calcium-blood-test_29.html
- Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/calcium_29.html
၄။ ဆရာခင်ဗျား Inj Depo ကို3times ထိုးထားတဲ့ Patient က အခု Depo ရပ် ထားတာ ၇ လရှိနေတာကို Menstruation မလာသေးတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ခင်ဗျာ။ ဘာဆက်လုပ်ပေးသင့်ပါလဲဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော့်ကို ဒီ FB message ကနေမျှဝေပေးပါဆရာ။
Depo Provera သုံးလခံ ထိုးဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/depo-provera.html
၅။ ဆရာ AIDS ကဘယ်လိုဖြစ်လဲသိချင်ပါတယ်။ စဖြစ်ရင်ရော ဘယ်လိုလက္ခဏာပြပါသလဲဆရာ။
၆။ ဆရာရှင့် ဗီတာမင် A to Z နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာ ဆရာရေးထားတာရှိရင် ဘယ်လိုင်းကို ဝင်ကြည့်ရမလဲ ပြောပြပါဆရာရှင့်။
Vitamin B complex ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စု http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-b-complex.html
Vitamin K ဗီတာမင် (ကေ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-k.html
Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-d.html
Vitamin B12 and Iron supplement ဘီ-၁၂ နှင့် သံဓါတ်လိုအပ်ချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-b12-and-iron-supplement.html
Vitamin E ညိုချောလေးတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-e.html
Folic acid ဖေါလစ်-အက်စစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/angular-stomatitis.html
Angular stomatitis ကျီးကန်းပါးစပ်နာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/folic-acid.html
ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်များရင် ကျောက်ကပ်ထိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးလလောက်က allergic ဖြစ်လို့ ဆေးခန်းသွားပြတော့ သမီးကို စီထရင်းလိုဆေးမျိုးနဲ့ Calcium J သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆေးဆိုင်က Calcium 500 နဲ့အတူတူပဲဆိုပြီး ရောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့ Calcium J ကိုပဲ ဝယ်သောက်တယ်။ တော်ကြာ Calcium က လိုအပ်တာထက် များသွားမှာ စိုးလို့ပါ။
Hypercalcemia သွေးထဲမှာ (ကယ်လ်စီယမ်) များနေခြင်း အကြောင်းတရား ၇ ပါးရှိတယ်။
၁။ Hyperparathyroidism (ပါရာသိုင်းရွိုက်) ဟော်မုန်းများနေခြင်း၊
၂။ ကင်ဆာ ဝ့ဝ၁% ရှိတယ်။
• Multiple Myeloma (မာလ်တီပယ်-မိုင်လိုးမား)၊
• Squamous cell cancer of the lung အဆုပ်ကင်ဆာတမျိုး၊
• Breast Cancer (very advanced) ရင်သားကင်ဆာ နောက်ပိုင်း၊
• Kidney Cancer (very advanced) ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ နောက်ပိုင်း၊
• Squamous Cell Cancer of the Head and Neck (very advanced) ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်း ကင်ဆာ နောက်ပိုင်း။
၃။ Sarcoidosis (ဆာကွိုက်ဒိုးဆစ်) ရောဂါ
၄။ Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) ဆေေးသောက်တာ များသွားခြင်း၊
၅။ Hydrochlorothyazide ဆီးအတင်းသွားစေတဲ့ဆေး၊
၆။ Milk-Alkali Syndrome ရောဂါ၊
၇။ Paget's disease of the Bone အရိုးရောဂါ၊
ဒါကြောင့် ဆေးသောက်လို့ ရောဂါရတဲ့အထိမဖြစ်ကြပါ။ ကျောက်ကပ်မှာ ရောဂါရှိမှသာ များနေမယ်။
Hypocalcemia (ကယ်လ်စီယမ်) နည်းနေခြင်း
သွေးစစ်တဲ့အဖြေမှာ 2.1 mmol/L or9mg/dl or an ionized calcium 1.1 mmol/L or 4.5 mg/dL ထက်နည်းတာကို ခေါ်တယ်။
CATS go numb ဆိုပြီး အမှတ်ရလွယ်အောင် လုပ်ထားတာရှိတယ်။ Convulsions, Arrhythmias, Tetany and numbness တက်မယ်၊ နှလုံးခုန်တာ မမှန်ဖြစ်မယ်။ လက်၊ ခြေ နဲ့ ပါးစပ်နားတဝှိုက် ထုံနေမယ်။ ဒါ့ပြင် Petechiae သွေးခြည်ဥလေးတွေထွက်မယ်။ Tetany ကြွက်တက်တာမှာ ၂ မျိုးရှိတယ်။ ချက်ချင်းကြီး အရမ်းနာပြီးတက်တာနဲ့ စမ်းကြည့်မှ တက်တာ။ ဆရာဝန်တွေက Trousseau sign, Chvostek's sign ဆိုတဲ့နည်းတွေနဲ့လဲစမ်းကြည့်မယ်။ Laryngospasm နဲ့ Cardiac arrhythmias တွေကတော့ အသက်ကိုရန်ရှာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်မှာတွေဘဲ။ ECG ရိုက်ရင် မူမမှန်တာတွေတွေ့မယ်။
နည်းနေသူတွေမှာ ဒီလို အန္တရာယ်ရှိလာမှာကို သတိထားရမယ်။
• Excessive bleeding သွေးယိုမယ်၊
• Fainting or feeling lightheaded မူးမေ့ချင်မယ်၊
• Hematoma အထဲသွေးယိုလို့ဖေါင်းနေတာဖြစ်မယ်၊
• Infection ရောဂါပိုးဝင်လွယ်မယ်၊
• Multiple punctures to locate veins သွေးခြည်ဥပေါ်မယ်။
အရေးပေါ်ဖြစ်ရင် Calcium gluconate 10% ၂ လုံးကို တခါတည်း ဖြေဖြေး ၁ဝ မိနစ်ကြာ သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးပေးရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းနေတာက နာတာရှည်ဖြစ်ပြီး ဆိုးဝါးနေသူကို အဲလို မပေးရဘူး။
(ကယ်လ်စီယမ်) ဘယ်လောက်လိုသလဲ -
အသက်။ ကျား-မ အလိုက်လိုအပ်တယ်။
ယောက်ျား (လူကြီး) တနေ့
19-50 years 1,000 - 2,500 mg
51-70 years 1,000 - 2,000 mg
71 and older 1,200 - 2,000 mg
မိန်းမ (လူကြီး) တနေ့
51 and older 1,200 - 2,000 mg
(ကယ်လ်စီယမ်) စုပ်ယူဘို့ ဗီတာမင် (ဒီ) လိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့် တွဲပေးလေ့ရှိတယ်။ လူကြီးတိုင်း တနေ့မှာ Vitamin D 600 IU (15 micrograms) လိုအပ်တယ်။
(ကယ်လ်စီယမ်) နဲ့ အစားအသောက်
• နွားနို့၊ ဒိန်၊ ဒိန်ခဲ၊
• အစိမ်းရောင်ရှိ အရွက်ဖါးဖါး အသီးအရွက်များ၊
• (ကယ်လ်စီယမ်) ဖြည့်စွက်ပေးထားတဲ့အစားအသောက်များ။
သက်သတ်လွတ်စားသူ၊ lactose intolerance ရောဂါရှိသူ၊ (ပရိုတင်း) အစာများလွန်သူ၊ ဆာစားများလွန်းသူ၊ Osteoporosis အရိုးမကောင်းသူ၊ Corticosteroids ဆေးကြာကြာသုံးနေရသူတွေမှာ အစားအသောက်ဂရုစိုက်ယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါ။
• Calcium carbonate (40 % elemental calcium)
• Calcium citrate (21 % elemental calcium)
• Calcium gluconate (9 % elemental calcium)
• Calcium lactate (13 % elemental calcium)
Calcium carbonate, Calcium citrate, Calcium gluconate နဲ့ Calcium lactate ဆိုပြီး ၄ မျိုးရှိတယ်။ Calcium carbonate က ဈေးချိုတယ်။ တခြား ဗီတာမင်တွေနဲ့ ရောထားတာတွေလဲရှိသေးတယ်။ များသွားလို့ မကောင်းတာလဲ သတိထားပါ။
အမျိုးသမီး နဲ့ ကယ်လ်စီယမ်
• အမျိုးသမီးတိုင်း တနေ့မှာ 1000 mg လိုတယ်။
• အသက် ၅ဝ ကျော်ရင် နည်းနည်းပိုလိုတယ်။ 1200 to 1,500 mg per day
• နို့တိုက်မိခင်တွေ 1,000 mg to 1,300 mg per day
• သတိထားဘို့က စားသောက်တာထဲမှာ ပါတာကိုလဲ ထည့်တွက်ရမယ်။
လူတွေမှာရှိတဲ့ (ဆဲလ်) တိုင်းက (ကယ်လ်စီယမ်) လိုအပ်တယ်။ အဓိကကတော့ အရိုးတွေ၊ သွားတွေကို သန်မာစေတယ်။ နှလုံးအလုပ်အတွက်လဲ အရေးပါတယ်။ ကြွက်သားညှစ်တာ၊ သွေးခဲတာနဲ့ အာရုံကြောအလုပ်တွေမှာလဲ (ကယ်လ်စီယမ်) ဓါတ်လိုတယ်။ ကိုယ်ထဲမှာ အရိုး၊ သွေးရည် နဲ့ (ဆဲလ်) အရည်တွေထဲမှာ ရှိနေတယ်။ သူရှိနေသင့်တဲ့ ပမာဏကို ဟော်မုန်း ၃ မျိုးက နေထိန်းချုပ်ပေးနေတယ်။ Parathyroid hormone (PTH), Vitamin D နဲ့ Calcitonin တွေဖြစ်ကြတယ်။
ဒီဓါတ် အနည်းအများအတွက် သွေးရောဆီးရော စစ်နိုင်တယ်။ ဆေးမစစ်ခင် သိထားဘို့က Calcium salts, Lithium, Thiazide diuretics, Thyroxine, Vitamin D ဆေး သောက်နေသူတွေနဲ့ နွားနို့ များများ သောက်နေသူတွေ စစ်တဲ့အခါ များနေနိုင်တယ်။
အရိုးရောဂါ၊ Multiple myeloma, Breast, Lung, Neck, Kidney ကင်ဆာ တချို့၊ Chronic kidney disease နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ Parathyroid gland (ပါရာသိုင်းရွိုက်) ရောဂါ၊ Chronic liver disease နာတာရှည် အသဲရောဂါ၊ အစာစုပ်မယူနိုင်တဲ့ရောဂါ၊ Thyroid gland or Thyroid hormone medication သိုင်းရွိုက်ရောဂါ။
Normal Results ပုံမှန်အဖြေမှာ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေက ယူနစ် မတူတာသုံးတာလဲ ရှိတယ်။ အဖြေရေးတာမှာ “ယူနစ်” က အရေးကြီးတယ်။
• Normal total calcium = 2.2-2.6 mmol/L (9-10.5 mg/dL) (8.5 to 10.2 mg/dL)
• Normal ionized calcium = 1.1-1.4 mmol/L (4.5-5.6 mg/dL)
• Total calcium ဆိုတာက serum albumin (အယ်လ်ဗြူမင်) ပရိုတင်းနဲ့ပေါင်းတယ်။
• Ionized calcium က အဲလို မပေါင်းဘူး။ ပိုတိကျတယ်။
Higher than normal levels ပုံမှန်ထက် များနေတာကို ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ တွေ့ရမယ်။
• Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) နဲ့ Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) သောက်တာ များလွန်းသူ၊
• HIV/AIDS ရှိနေသူ၊
• Hyperparathyroidism (ပါရာသိုင်းရွိုက်) လွန်ကဲနေသူ၊
• Tuberculosis and Fungal and Mycobacterial infections ရောဂါပိုးတခုခုဝင်နေသူတွေ၊
• ပြန့်နေတဲ့ အရိုးကင်ဆာ၊ Multiple myeloma ကင်ဆာ၊
• Hyperthyroidism သိုင်းရွိုက် လွန်ကဲနေသူ၊ thyroid hormone ဆေးအစားထိုးတာများသွားသူ၊
• Paget's disease (ပေးဂျက်စ်) ရောဂါ၊
• Sarcoidosis (ဆာကွိုက်ဒိုးဆစ်) ရောဂါ၊
Lower than normal levels ပုံမှန်ထက် နည်းနေတာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ တွေ့ရမယ်။
• Hypoparathyroidism (ပါရာသိုင်းရွိုက်) နည်းနေသူ၊
• Kidney failure ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်သူ၊
• Liver disease အသဲရောဂါ၊
• Magnesium deficiency (မက်ဂနီဆီယမ်) နည်းနေသူ၊
• Absorption of nutrients အစာစုပ်မယူနိုင်သူ၊
• Osteomalacia အရိုးရောဂါ၊
• Pancreatitis သရက်ရွက်ရောဂါ၊
• Vitamin D deficiency ဗီတာမင် (ဒီ) နည်းနေသူ၊
Hypocalcaemia (Hypocalcemia) (ကယ်လ်စီယမ်) နည်းနေခြင်း
2.1 mmol/L or9mg/dl or an ionized calcium 1.1 mmol/L or 4.5 mg/dL ထက်နည်းတာကို ခေါ်တယ်။
Symptoms ဘာတွေခံစားရမလဲ -
Risks နည်းနေသူတွေမှာ ဒီလို အန္တရာယ်ရှိလာမှာကို သတိထားရမယ်။
Calcium requirements ဘယ်လောက်လိုသလဲ -
Men ယောက်ျား (လူကြီး) တနေ့
Women မိန်းမ (လူကြီး) တနေ့
Calcium and diet (ကယ်လ်စီယမ်)နဲ့ အစားအသောက်
• Dairy products, such as cheese, milk and yogurt နွားနို့၊ ဒိန်၊ ဒါန်ခဲ၊
• Dark green leafy vegetables အစိမ်းရောင်ရှိ အရွက်ဖါးဖါး အသီးအရွက်များ၊
• Fish with edible soft bones အရိုးပါစားလို့ရတဲ့ငါးများ၊
• Calcium-fortified foods and beverages (ကယ်လ်စီယမ်) ဖြည့်စွက်ပေးထားတဲ့အစားအသောက်များ။
Calcium supplements ဘယ်လိုဆေးသောက်မလဲ
Nan Aye ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်များရင် ကျောက်ကပ်ထိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးလလောက်က allergic ဖြစ်လို့ ဆေးခန်းသွားပြတော့ သမီးကို စီထရင်းလိုဆေးမျိုးနဲ့ Calcium J သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆေးဆိုင်က Calcium 500 နဲ့အတူတူပဲဆိုပြီး ရောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့ Calcium J ကိုပဲ ဝယ်သောက်တယ်။ တော်ကြာ Calcium က လိုအပ်တာထက် များသွားမှာ စိုးလို့ပါ။
High Blood Calcium (Hypercalcemia) သွေးထဲမှာ (ကယ်လ်စီယမ်) များနေခြင်း အကြောင်းတရား ၇ ပါးရှိတယ်။
Calcium for women အမျိုးသမီး နဲ့ ကယ်လ်စီယမ်
• အသက် ၅ဝ ကျောက်ရင် နည်းနည်းပိုလိုတယ်။ 1200 to 1,500 mg per day
Erectile Dysfunction Physiology ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် ရောဂါဗေဒ
ဒီအကြောင်းကို ရေးထားတာကြာပါပြီ။ (ဘလော့ခ်) မှာသာတင်ထားပြီး၊ (ဖေ့စ်ဘွတ်) မှာမတင်ပါ။ ကနေ့မနက် မေးခွန်း ၂ ခုကို (ကွန်မင့်) နေရာကနေမေးလာတယ်။ တင်ပေးဘို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ နားလည်ခွင့်ပြုကြပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ပန်းသေ-ပန်းညှိုးကို Erectile Dysfunction နဲ့ Impotence လို့ခေါ်တယ်။ “လိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ဘို့ရာ ကျား-လိင်အင်္ဂါ လုံလောက်အောင် မသန်မာနိုင်တာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အပြည့်အဝမဖြစ်နိုင်တာ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါ သန်မာမှုဆိုတာ (ဟိုက်ဒရောလစ်) တံခါးမျိုးလိုဘဲ လိင်တံထဲကို သွေးတွေစီးဝင်လာရာကနေ ဖြစ်လာစေရပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါသန်မာဘို့ရာ ဖြစ်စဉ် ၂ ခုရှိပါတယ်။
(၁) Reflex erection ဆိုတာ လိင်အင်္ဂါကို ထိကိုင်တဲ့အခါ တုံ့ပြန်မှု၊ Peripheral nerves အဖျားပိုင်းက အာရုံကြောတွေနဲ့ ခါးဆစ်ထဲက အာရုံကြောတွေကနေ လုပ်ပေးတယ်။ လိင်အင်္ဂါကို ထိကိုင်တာနဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကြောင့် Nitric oxide (နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုက်) တွေ ထွက်လာစေတယ်။ သူ့ကြောင့် လိင်တံထဲက Corpora cavernosa ထဲမှာရှိတဲ့ Smooth muscles အနုစားကြွက်သားတွေ Relaxation ပျော့ကျယ်လာစေမယ်။
(၂) Psychogenic erection စိတ်ပိုင်းကနေလုပ်ပေးတာ။ Sexual arousal လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကနေ အစပျိုးတယ်။
ကျား-အစိကနေလဲ Testosterone (တက်စတိုစတီရုန်း) ဟော်မုန်း ကိုထုတ်ပေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ (ပစ်ကျူထရီ) အိတ်ကလေးကလဲ သူ့အလုပ်သူ ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဘို့ လိုသေးတယ်။
1. Hormonal deficiency ဟော်မုန်း နည်းနေရင်၊
2. Disorders of the neural system အာရုံကြော မကောင်းရင်၊
3. Lack of adequate penile blood supply သွေးပို့လွှတ်မှု မကောင်းရင် နဲ့
4. Psychological problems စိတ်အခြေအနေမှာ အားနည်းချက်ရှိရင် ပန်းညှိုး-ပန်းသေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ED ရောဂါဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ကြတာများတယ်။ အသက် ၆ဝ ကျော်ရင် ၃၅% မှာ ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ရှိနေကြတယ်။ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းခံတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အသက် ၆ဝ ကျော်သူတွေမှာ ၄ဝ ကျော်တွေထက် ၄ ဆ ပိုဖြစ်တယ်။ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်နိုင်တာ၊ သွေးတိုး၊ ဆေးလိပ်စွဲတာ၊ အရက်စွဲတာ၊ အားကုန်နေတာ၊ လူအဝလွန်တာ၊ (တက်စတိုစတီရုန်း) ဟော်မုန်းနည်းနေတာ၊ (အာဆင်းနိတ်) အဆိပ်သင့်တာ။
ယောက်ျားတွေဟာ Medications ဆေးများများသောက်လေလေ ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဖြစ်နိုင်ခြေ များလေလေဖြစ်တယ်လို့ Kaiser Permanente သုတေသီတွေကနေ British Journal of Urology International မှာရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်စေနိုင်တာသာမကဘူး ဖြစ်နေရင်လဲ ပိုဆိုးစေနိုင်ပါသေးတယ်။ California Men's Health Study ကနေ Diana C. Londoño က ဦးဆောင်ပြီး၊ ၄၆ နှစ်ကနေ ၆၈ နှစ်ကြားအရွယ်ရှိတဲ့ အတန်းအစားပေါင်းစုံက ယောက်ျားပေါင်း ၃၇၇၁၂ ယောက်ကို ၂ဝဝ၂ ကနေ ၂ဝဝ၃ ကြားမှာ သူတို့သောက်ခဲ့တဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေကို စုဆောင်းပါတယ်။ အဓိကဆေး ၃ မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်တာတွေထဲမှာ SSRIs စိတ်မကျဆေးတွေ၊ Nicotine (နီကိုတင်း) နဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေက အများဆုံး ဖြစ်တယ်။ ခါးရိုးဆစ် ထိခိုက်တာ၊ ဦးနှောက်ထိခိုက်တာ၊ (ပါကင်ဆန်) ရောဂါ၊ (အယ်လ်ဇိုင်းမား) ရောဂါ၊ (မာလ်တီပယ်-စကယ်လရိုးဆစ်) ရောဂါ နဲ့ (စထုပ်ခ်) ရောဂါ၊ Peyronie's disease ရောဂါတွေ ရှိနေတာ။ အူမကြီး၊ ဆီးကျိတ်၊ ဆီးအိမ်၊ အစာဟောင်းအိမ်တွေမှာ ခွဲစိတ်တာ၊ ဓါတ်ကင်တာ၊ စိတ်အခြေခံတွေကတော့ လက်တွေ့စိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်ဖိအား များခြင်း၊ တကယ့်စိတ်ကျရောဂါ၊ (စကစ်ဇိုဖရီးနီးယား)၊ ဆေးစွဲခြင်း၊ (ပင်းနစ်) ထိန်းမနိုင်-သိမ်းမရ စိတ်ရောဂါ၊ စိတ်ကျခြင်း၊ (ပါဇင်နယ်လ်တီ) တကိုယ်ရေစိတ်ရောဂါ၊ အဆိုးမြင်စိတ်တွေ၊ ၂ဝဝ၂ သုတေသနတခုအရ စက်ဘီးစီးတာနဲ့လဲ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ ၂ဝ၁၁ သုတေသနတခုအရ NSAIDs အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၃ လမက သောက်သူတွေဟာ ၂၂% ပိုဖြစ်တာ တွေ့ရတယ်။
• Hypogonadism, Prolactinoma, Coronary artery disease and Peripheral vascular disease နဲ့ Diabetes ရောဂါတွေရှိ-မရှိ စစ်ရမယ်။
• Duplex ultrasound ရိုက်ရင် သွေးစီးလျှောက်မှုကို သိနိုင်တယ်။
• Penile nerves function စမ်းသပ်နည်း၊
• Nocturnal penile tumescence (NPT) နည်း၊
• ယောက်ျားတယောက်ဟာ အိပ်နေတုံး (REM) အဆင့်အတွင်းမှာ လိင်သန်မာမှု ၅-၆ ကြိမ်ဖြစ်တာ ပုံမှန်ပါ။ အဲလိုမဖြစ်ရင် Nerve function နဲ့ Blood supply တွေ ချို့ယွင်းနေမယ်။ Snap gauge နဲ့ Strain gauge ကရိယာတွေနဲ့ တိုင်းတာ စစ်ဆေးနိုင်တယ်။
- Penile biothesiometry စမ်းသပ်နည်း၊
- Dynamic infusion cavernosometry (DICC) နည်း၊
- Corpus cavernosometry နည်း၊
- Magnetic resonance angiography (MRA) နည်း။
• (အာဆင်းနိတ်) အဆိပ်သင့်သူတွေမှာ Potassium (ပိုတက်ဆီယန်) ဓါတ်ဆား နည်းနေတာကို ပြင်ပေးရတယ်။
• Alprostadil penis suppository ဆေးကို ဆီးသွားပြွန်ထဲ ထည့်ပေးရတယ်။
• Papaverine, Phentolamine, Prostaglandin E1 ဆေးကို လိင်အင်္ဂါမှာ ကိုယ့်ဖါသာ ထိုးရတယ်။ Alprostadil (Alprostadil, Caverject Impulse, Edex) ဆေးတွေ၊
• Penile prosthesis လိင်အင်္ဂါအတု တပ်မယ်၊
• Penis pumps (Vacuum constriction device) (ပန့်ပ်) ကရိယာသုံးမယ်၊ (ရေးထားပါတယ်။)
• Vascular reconstructive surgery ခွဲစိတ်ကုသနည်။
• Testosterone replacement (တက်စတိုစတီရုန်း) ဟော်မုန်းပေးခြင်း၊ (ရေးထားပါတယ်။)
• Alprostadil (Vitaros) cream လိမ်းဆေးလဲ ကနေဒါမှာ ခွင့်ပြုချက်ရထားတယ်။
(တက်စတိုစတီရုန်း) ဟော်မုန်းနည်းနေသူဟာ လိင်စိတ်လာတာ နည်းနေမယ်၊ နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်နေမယ်၊ စိတ်ဓါတ် ကျနေမယ်၊ အာရုံစိုက်ရတာ မှတ်သားရတာ အားနည်းနေမယ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာလဲ ပိန်လှီနေမယ်၊ (ကိုလက်စထော) အလုပ်မမှန်ဖြစ်နေမယ်၊ သွေးအားနည်းနေမယ်၊ အရိုးအားနည်းနေမယ်၊ ကိုယ်မွှေးပေါက်တာ ပါးနေမယ်၊ (တက်စတိုစတီရုန်း) နည်း-မနည်း သွေးစစ်ရင်သိမယ်။ မနက်ခင်းမှာ စမ်းတာပိုကောင်းတယ်။ နည်းနေသူတွေကို
- Testosterone IM ၂-၃ ပါတ်တခါ ထိုးနိုင်တယ်။
- Testosterone patches ကပ်ခွါကပ်ထားနိုင်တယ်။ တနေ့တခါ ကပ်ရတယ်။ နေရာပြောင်းပြီးကပ်နိုင်တယ်။ သောက်ဆေး မရှိသေးပါ။ ရှိရင်လဲ အသဲကို ပိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။
- Testosterone ဆေးပေးရင် Prostate ဆီးကျိတ်ကိုကြီးစေတယ်။ Prostate cancer ဆီးကျိတ်-ကင်ဆာ ရှိရင် မသင့်ဘူး။
Testosterone ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = အဆီပြန်မယ်၊ ဝက်ခြံပေါက်မယ်၊ ကိုယ်ရောင်မယ်၊ ရင်သားထွားမယ်၊ အိပ်ရေးပျက်မယ်၊ ကျား-အစေ့ သေးသွားနိုင်တယ်၊ ကိုလက်စထော အနည်း-အများပြောင်းမယ်၊ သွေးနီဥများမယ်၊ သုက်ပိုးနည်းစေပြီး ကလေးမရဖြစ်စေနိုင်တယ်၊
ရောဂါအခံတွေလဲမရှိ၊ ပြောခဲ့တာတွေကိုလဲ ပြင်လို့မှ မရသေးရင် Psychological counseling (Stress, Anxiety or Depression) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုခံယူပါ။ သက်သာ-ကောင်းမွန်-ပျောက်ကင်းစေမှာ အမှန်ပါ။
ဆရာဝန်မလိုဘဲ ပျောက်ကင်းနိုင်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
- လိင်ဆက်ဆံတာကို လိုတာထက်ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ ပြင်ပါ။
- အလုပ်-မိသားစုအတွင်း စိတ်အခန့်မသင့် ဖြစ်နေတာ ပြင်ပါ။
- ကိုယ့်ဇနီး-မိန်ကလေးနဲ့ ဆက်ဆံရေး ကျဲနေတာ ပြင်ပါ။
- ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိင်ကိစ္စမှာ ယုံကြည်မှု မနည်းသင့်ဘဲ နည်းနေတာ ပြင်ပါ။
- ကိုယ့်မိန်းကလေးဖေါ်ကနေ အနုတ်သဘော ပြောတာကို ပြောင်းစေပါ။ မေ့ထားလိုက်ပါ။
- လူနေမှုဘဝ ပုံစံပောင်းသင့်ရင် ပြောင်းပါ။ ဥပမာ Smoking ဆေးလိပ်၊ အရက်ဖြတ်ပါ၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပါ၊ (အေရိုးဘစ်) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ပိုကောင်းစေမယ်။
တခြားနည်းတွေရှိပေမဲ့ FDA ကနေ အသိအမှတ်ပြုပေးမထားပါ။
- Acupuncture အပ်စိုက်နည်း၊
- Korean red ginseng (Panax ginseng) ကိုရီးယား (ဂျန်ဆင်း)၊
- Yohimbine (ယိုဟင်ဘီးန်)၊
- DHEA (dehydroepiandrosterone) (ဒီအိတ်ခ်ျအီးအေ)၊
- Ginkgo (ဂျင်ဂို)၊
- L-arginine (အယ်လ်-အာဂျနင်း)၊
- Herbal Viagra ဟာဘယ် ဗိုင်ယာဂရာ၊
- Viagra သန်မာစေတဲ့ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/viagra.html
- Penile Injection Therapy ကျားလိင်အင်္ဂါ ဆေးထိုးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/penile-injection-therapy.html
- Low Testosterone (တက်စတိုစတီရုံး) နှင့် လိင်စိတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/low-testosterone.html
- Erectile Dysfunction Physiology ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် ရောဂါဗေဒ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/erectile-dysfunction-physiology.html
- Libido ဟိုစိတ်-ဒီစိတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/libido.html
- Erectile Dysfunction ပန်းသေ-ပန်းညှိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/erectile-dysfunction.html
- Erectile Dysfunction Causes ပန်းသေ-ပန်းညှိုး အချက် (၉) ချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/erectile-dysfunction-causes.html
- Viagra in Heart Disease နှလုံးရောဂါ နဲ့ (ဗိုင်ယာဂရာ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/viagra-in-heart-disease.html
- Cialis (Tadalafil) ပန်းသေပန်းညှိုးအတွက်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cialis-tadalafil.html
ပန်းသေ-ပန်းညှိုးကို Impotence လို့အများသိပြီး ဆေးစာမှာ Erectile Dysfunction လို့ခေါ်ခေါ်တယ်။ “လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုနိုင်ဘို့ရာ ကျား-လိင်အင်္ဂါ လုံလောက်အောင် မသန်မာနိုင်တာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အပြည့်အဝ မဖြစ်နိုင်တာ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါ သန်မာမှုဆိုတာ (ဟိုက်ဒရောလစ်) နည်းလိုဘဲ လိင်တံထဲကို သွေးတွေ စီးဝင်လာရာကနေ ဖြစ်လာစေတယ်။
(၁) လိင်အင်္ဂါကို ထိကိုင်တဲ့အခါ တုံ့ပြန်မှုနဲ့ အဖျားပိုင်းက အာရုံကြောတွေနဲ့ ခါးဆစ်ထဲက အာရုံကြောတွေကနေ လုပ်ပေးတယ်။ လိင်အင်္ဂါကို ထိကိုင်တာနဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကြောင့် (နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုက်) တွေ ထွက်လာစေတယ်။ သူ့ကြောင့် လိင်တံထဲက Corpora cavernosa ထဲမှာရှိတဲ့ အနုစားကြွက်သားတွေ ပျော့ကျယ်လာစေမယ်။
(၂) စိတ်ပိုင်းကနေ လုပ်ပေးတာ။ လိင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကနေ အစပျိုးတယ်။
ED ရောဂါဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ကြတာ များတယ်။ အသက် ၆ဝ ကျော်ရင် ၃၅% မှာ ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ရှိနေကြတယ်။ ယောက်ျားတွေဟာ ဆေးများများသောက်လေလေ ပန်းသေ-ပန်းညှိုးဖြစ်နိုင်ခြေ များလေလေဖြစ်တယ်။ ဖြစ်နေရင်လဲ ပိုဆိုးစေနိုင်ပါသေးတယ်။ အသက် ၄၆ နှစ်ကနေ ၆၈ နှစ်ကြားအရွယ်ရှိတဲ့ အတန်းအစားပေါင်းစုံက ယောက်ျားပေါင်း ၃၇၇၁၂ ယောက်ကို ဆန်းစစ်ခဲ့တာပါ။
ပန်းသေ-ပန်းညှိုး အချက် (၉) ချက်
ဟော်မုန်းနည်းနေသူဟာ လိင်စိတ်လာတာ နည်းနေမယ်၊ နေမကောင်း ထိုင်မသာဖြစ်နေမယ်၊ စိတ်ဓါတ် ကျနေမယ်၊ အာရုံစိုက်ရတာ မှတ်သားရတာ အားနည်းနေမယ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာလဲ ပိန်လှီနေမယ်၊ (ကိုလက်စထော) အလုပ်မမှန်ဖြစ်နေမယ်၊ သွေးအားနည်းနေမယ်၊ အရိုးအားနည်းနေမယ်၊ ကိုယ်မွှေးပေါက်တာ ပါးနေမယ်။ (တက်စတိုစတီရုန်း) နည်း-မနည်း သွေးစစ်ရင်သိမယ်။ မနက်ခင်းမှာ စမ်းတာပိုကောင်းတယ်။ နည်းနေသူတွေကို ၂-၃ ပါတ်တခါ ထိုးနိုင်တယ်။ Testosterone patches ကပ်ခွါကပ်ထားနိုင်တယ်။ တနေ့တခါ ကပ်ရတယ်။ နေရာပြောင်းပြီးကပ်နိုင်တယ်။ သောက်ဆေး မရှိသေးပါ။ ရှိရင်လဲ အသဲကို ပိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ ဆေးပေးရင် ဆီးကျိတ်ကိုကြီးစေတယ်။ ဆီးကျိတ်-ကင်ဆာ ရှိရင် မသင့်ဘူး။
ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = အဆီပြန်မယ်၊ ဝက်ခြံပေါက်မယ်၊ ကိုယ်ရောင်မယ်၊ ရင်သားထွားမယ်၊ အိပ်ရေးပျက်မယ်၊ ကျား-အစေ့ သေးသွားနိုင်တယ်၊ ကိုလက်စထော အနည်း-အများပြောင်းမယ်၊ သွေးနီဥများမယ်၊ သုက်ပိုးနည်းစေပြီး ကလေးမရဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Erectile Dysfunction (2) ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဖြစ်စေနိုင်သည့်ဆေးများ
(၁) Antidepressants and other psychiatric medications စိတ်ကျဆေးများ
Amitriptyline (Elavil), Amoxapine (Asendin), Buspirone (Buspar), Chlordiazepoxide (Librium), Chlorpromazine (Thorazine), Clomipramine (Anafranil), Clorazepate (Tranxene), Desipramine (Norpramin), Diazepam (Valium), Doxepin (Sinequan), Fluoxetine (Prozac), Fluphenazine (Prolixin), Imipramine (Tofranil), Isocarboxazid (Marplan), Lorazepam (Ativan), Meprobamate (Equanil), Mesoridazine (Serentil), Nortriptyline (Pamelor), Oxazepam (Serax), Phenelzine (Nardil), Phenytoin (Dilantin), Sertraline (Zoloft), Thioridazine (Mellaril), Thiothixene (Navane), Tranylcypromine (Parnate), Trifluoperazine (Stelazine)
(၂) Antihistamine medications (အင်တီ-ဟစ်တမင်း) ဆေးများ၊ (အချို့ဆေးများကို လေနာရောဂါအတွက်လည်း သုံးသည်), Cimetidine (Tagamet), Dimenhydrinate (Dramamine), Diphenhydramine (Benadryl), Hydroxyzine (Vistaril), Meclizine (Antivert), Nizatidine (Axid), Promethazine (Phenergan), Ranitidine (Zantac)
(၃) High blood pressure medicines and diuretics သွေးတိုးကျဆေးများ (သွေးကျဆေးများထဲတွင် Thiazides ဆေးအုပ်စုသည် ပဌမ၊ beta-blockers ဘီတာ-ဘလော့ကာများသည် ဒုတိယ ကျား-လိင်အင်္ဂါ မသန်မာခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Alpha-blockers အာလ်ဖါ-ဘလော့ကာများသည် အဖြစ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။)
Atenolol (Tenormin), Bethanidine, Bumetanide (Bumex), Captopril (Capoten), Chlorothiazide (Diuril), Chlorthalidone (Hygroton), Clonidine (Catapres).Enalapril (Vasotec), Furosemide (Lasix), Guanabenz (Wytensin), Guanethidine , (Ismelin), Guanfacine (Tenex), Haloperidol (Haldol), Hydralazine (Apresoline), Hydrochlorothiazide (Esidrix), Labetalol (Normodyne), Methyldopa (Aldomet), Metoprolol (Lopressor), Nifedipine (Adalat, Procardia), Phenoxybenzamine (Dibenzyline), Phentolamine (Regitine), Prazosin (Minipress), Propranolol (Inderal), Reserpine (Serpasil), Spironolactone (Aldactone), Triamterene (Maxzide), Verapamil (Calan)
(၄) Parkinson's disease medications (ပါကင်ဆိုနဇင်) ရောဂါဆေးများ၊
Benztropine (Cogentin), Biperiden (Akineton), Bromocriptine (Parlodel), Levodopa (Sinemet), Procyclidine (Kemadrin), Trihexyphenidyl (Artane)
(၅) Chemotherapy and hormonal medications ကင်ဆာဆေးများ နှင့် ဟော်မုန်းဆေးများ၊
- Antiandrogens (Casodex, Flutamide, Nilutamide) ဟော်မုန်းဆေ, Busulfan (Myleran) ကင်ဆာဆေး၊, Cyclophosphamide (Cytoxan) ကင်ဆာဆေး၊ Ketoconazole မှိုရောဂါဆေး၊, LHRH agonists (Lupron, Zoladex) ဟော်မုန်းဆေး၊
(၆) Other medications တခြားဆေးများ၊
Aminocaproic acid (Amicar) သွေးထွက်သက်သာဆေး၊ Atropine ချွဲ-အစာခြေရည် နည်းစေသည့်ဆေး၊ Clofibrate (Atromid-S) အဆီကျဆေး၊ Cyclobenzaprine (Flexeril) ကြွက်သားပျော့ဆေး၊ Cyproterone ကျား-ဟော်မုန်း နှိမ်ဆေး၊ Digoxin (Lanoxin) နှလုံးရောဂါဆေး၊ Disopyramide (Norpace) နှလုံးခုန်မှန်ဆေး၊ Estrogen (အီစထိုဂျင်) ဟော်မုန်း၊ Finasteride (Propecia, Proscar, Avodart) ဆီးကျတ်ရောင် သက်သာဆေး၊ Furazolidone (Furoxone) ပိုးသေဆေး၊ H2 blockers (Tagamet, Zantac, Pepcid) လေနာသက်သာဆေး၊ Indomethacin (Indocin) ဂေါက်ရောဂါဆေး၊ Lipid-lowering agents အဆီကျဆေး၊ Licorice လေနာသက်သာဆေး၊ Metoclopramide (Reglan) အအန်ပျောက်ဆေး၊ NSAIDs (Ibuprofen, etc.) အနာ-အကိုက်သက်သာဆေး၊ Orphenadrine (Norflex) အနာသက်သာဆေး၊ Prochlorperazine (Compazine) အအန်ပျောက်ဆေး၊ Pseudoephedrine (Sudafed) အအေးမိသက်သာဆေး၊
(၇) Opiate analgesics ဘိန်းပါသည့် အနာ-အကိုက်သက်သာဆေးများ၊
Codeine, Fentanyl (Innovar), Hydromorphone (Dilaudid), Meperidine (Demerol), Methadone, Morphine, Oxycodone (Oxycontin, Percodan)
(၈) Recreational drugs စိတ်ကိုသက်ရောက်စေသောဆေးများ၊
Alcohol အရက်၊ Amphetamines (အင်ဖတမင်း)၊ Barbiturates (ဘာဘီကျူရိတ်)၊ Cocaine (ကိုကင်း)၊ Marijuana ဆေးခြောက်၊ Heroin ဘိန်းဖြူ၊ Nicotine (နီကိုတင်း)၊
Sildenafil (Viagra), Vardenafil (Levitra or Staxyn) နဲ့ Tadalafil (Cialis) ဆိုတဲ့ ဆေးနာမည်တွေနဲ့ အမေရိကားမှာ ဝယ်လို့ရတယ်။ Avanafil (Stendra) ဆေးကို FDA ကနေ ၂ဝ၁၂ ဧပြီလမှာ ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။
တခြားနာမည်တွေနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ထုတ်လုပ်တယ်။ နာမည်ရှိတဲ့ ဆေးကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်တာကိုသာ သုံးသင့်တယ်။ ဆေးတွေအားလုံး ထိရောက်တယ်၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲ နည်းတယ်။ လူသုံးများလှနေပြီ။ အလုပ်လုပ်ပုံ ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်။
• Viagra နဲ့ Levitra ကပိုတူတယ်။ အစာနဲ့ တွဲမသောက်ရဘူး။ ကိုယ်လိုအပ်မဲ့အချိန်ထက် ၃ဝ-၆ဝ မိနစ် ကြိုသောက်ထားပါ။ ၅ နာရီအထိ ဆေးအစွမ်းရှိတယ်။
• Cialis ကို အစာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။ ချက်ချင်းလို သက်ရောက်လို့ ကြိုသောက်စရာ မလိုဘူး။ တရက်ခံတယ်။ Cialis (36-hour) ဆိုရင်တော့ မိနစ် ၃ဝ ကြိုတင်သောက်ပါ။ ၃၆ နာရီခံတယ်။
• Vardenafil (Levitra) ဆေးကို လျှာအောက်ငုံရတဲ့ Staxyn ဆေးပြားလဲ လာတယ်။
• ဆေး ၃ မျိုးလုံးကို တနေ့မှာ တခါသာသောက်ပါ။ Viagra ဆိုရင် 50mg နဲ့လဲရတဲ့သူ များတယ်။ အဲလိုလူတွေက တနေ့ ၂ ခါအထိ သောက်နိုင်တယ်။
• သတိထားစရာတွေ -
- နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ၊ သွေးတိုးရောဂါ ထိန်းဘို့ခက်ခဲတဲ့သွေးတိုးရောဂါ၊ Retinitis pigmentosa မျက်စိရောဂါရှိသူ၊ ဆိုးဝါးတဲ့ အသဲရောဂါရှိသူ၊ ဆိုးဝါးတဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိသူတွေ ဒီဆေးကို မသုံးသင့်ဘူး။
- Nitroglycerin, Isosorbide နဲ့ Poppers ခေါ်တဲ့ တရားမဝင်ဆေးသုံးသူတွေ ဒီဆေးနဲ့ တွဲ မသောက်သင့်ဘူး။
- Alpha blockers, Antibiotics, Anti-seizure medications, Blood thinners နဲ့ Anti-arrhythmic heart medications ဆေးတွေသောက်နေရသူဆိုရင် ဆရာဝန်ကိုအရင်ပြောပါ။
• ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ခေါင်းကိုက်တာ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ အစာမကျေဖြစ်တယ်။ နှာခေါင်းက နှာစေးသလိုဖြစ်မယ်။ ခေါင်းမူးတာနဲ့ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ချင်တာ အတော်ရှားရှားပါးပါးဖြစ်မယ်။ Cialis ကြောင့်ဆိုရင် ခါးနာ၊ ကြွက်သားနာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ Viagra နဲ့ Levitra တွေကနေ မျက်နှာနီမြန်းတာဖြစ်မယ်။ ခဏတာ မျက်စိ ကြည့်မကောင်းတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဆရာဝန်မလိုဘဲ ပျောက်ကင်းနိုင်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံတာကို လိုတာထက်ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ ပြင်ပါ။ အလုပ်-မိသားစုအတွင်း စိတ်အခန့်မသင့် ဖြစ်နေတာ ပြင်ပါ။ ကိုယ့်ဇနီး-မိန်ကလေးနဲ့ ဆက်ဆံရေး ကျဲနေတာ ပြင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိင်ကိစ္စမှာ ယုံကြည်မှု မနည်းသင့်ဘဲ နည်းနေတာ ပြင်ပါ။ ကိုယ့်မိန်းကလေးဖေါ်ကနေ အနုတ်သဘော ပြောတာကို ပြောင်းစေပါ။ မေ့ထားလိုက်ပါ။ လူနေမှုဘဝ ပုံစံပြောင်းသင့်ရင် ပြောင်းပါ။ ဆေးလိပ်၊ အရက်ဖြတ်ပါ၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပါ၊ (အေရိုးဘစ်) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ပိုကောင်းစေမယ်။
ပန်းသေ-ပန်းညှိုးဖြစ်တာကို ကုစားနည်းတွေ ကြိုးစားပမ်းစား ရှာဖွေခဲ့ကြရတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်လဲဖြစ် နောက်ထပ် ပေါ်စရာမလိုတော့ဘူး ပြောနိုင်မဲ့ Viagra ဆေးကို ၁၉၉၈ မတ်လ ၂၇ ရက်ကစပြီး ဆိုင်တင်ခဲ့ပါပြီ။ ဆေးက တကယ် အစွမ်းထက်သလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက သိပ်ထူးလှတာ မဟုတ်လို့ အလွန်အောင်မြင်တဲ့ အသစ်တီထွင်မှု ဖြစ်တယ်။ ဒေါ်လာ သန်းထောင်ကျော် စီးပွါးရေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးတိုင်းမှာ Generic name ဆေးနာမယ်နဲ့ Trade name အရောင်းအဝယ်လုပ်ဘို့ပေးတဲ့ နာမယ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိရာမှာ Viagra က Generic နာမယ်ပါ။ တခြားနာမယ်တွေ Caverta, Sildenafil citrate, Revatio စသဖြင့် ရှိသေးတယ်။ Viagra ကို Nicknames တင်စားခေါ်တာတွေလဲ ရှိတယ်။ Vitamin V, Mo Mojo, Woodmaker, The pill for men, Soft Tabs, Blue Pill စသဖြင့်။ Kamagra ကလဲ တရားဝင်အရောင်းနာမည် ဖြစ်လာတယ်။
Sildenafil citrate ဆေးဟာ Pfizer Company ရဲ့ Generic Viagra ဆိုပြီးပေးတဲ့ မူပိုင်ဖြစ်လို့ နောက်လူတွေ ဒီနာမယ် အတိုင်း ရောင်းလို့မရပါ။ Herbal Viagra, Natural Viagra ဆိုတာတွေက အတုလို့ ပြောနိုင်တယ်။ (အွန်လိုင်း) ကနေ ဝယ်ခြင်ရင် သတိထားပေးတာထဲမှာ “အဆိုးဆုံးက တရုပ်-ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တယ်” လို့ ဆိုတယ်။ ဆေးကို စစ်ကြည့်တော့ Sildenafil citrate မပါဘူးတဲ့။
ဆေးသောက်လိုက်ရင် PDE5 (အင်ဇိုင်း) ကို တားဆီးပေးတယ်။ ကြွက်သားနုတွေကို ပြော့စေပြီး၊ ကျားအင်္ဂါမှာ သွေးပိုလျှောက်လာစေတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် လိင်အင်္ဂါသန်မာလာစေတယ်။ အသုံးမပြုခင် နာရီဝက် ကြိုသောက်ရပြီး၊ အစွမ်းက ၄-၆ နာရီအထိ ရှိတယ်။ လက်တွေ့ သုံးသူတွေ ပြောတာက ဆေးသောက်ပြီး၊ ၁ နာရီနဲ့ ၂ နာရီအတွင်း အစွမ်းထက်ဆုံးဘဲတဲ့။ 25, 50, 100 mg အနေနဲ့ ရောင်းပါတယ်။ 50 mg က အများဆုံးသုံးတဲ့ စံဖြစ်ပါတယ်။ စသုံးသူတွေကို 50 mg ဘဲ သောက်ရတယ်။ အသက်ကြီးတိုင်း များရတာမဟုတ်ပါ။ ၆၅ နှစ် ကျော်သူ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းချို့ယွင်းနေသူတွေကို 25 mg သာ ပေးပါတယ်။
တခါသောက်ရင် 100 mg ထက် မကျော်နဲ့။ ၂၄ နာရီအတွင်း တခြားသတ္တိတူရှိတဲ့ Tadalafil (Cialis), Vardenafil (Levitra) ဆေးတွေနဲ့ တွဲမသောက်ပါနဲ့။ ဒါတွေကလဲ Phosphodiesterase inhibitor ဆေးတွေဘဲ။ များသွားရင် Priapism လို့ ခေါ်တဲ့ တောင့်တင်းနေတဲ့ လိင်အင်္ဂါကပြန်မကျတာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
သာမန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေသာ ရှိပါတယ်။ မျက်နှာနီမြန်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ နှာစေးသလိုဖြစ်၊ အစာမကျေ၊ ပျို့ချင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အလင်းရောင်ကြည့်တာ နဲနဲထိခိုက်တတ်တယ်။ ခဏပါ။ နှလုံးရောဂါ အခံရှိသူတွေအတွက် မသင့်ပါ။ နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါဆေး၊ Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, Nitro-Bid, Isosorbide တွေနဲ့အတူ မသောက်ရပါ။ အရက်က Viagra ဆေးစွမ်းကို ယာယီနည်းစေတယ်။ ဆေးကို အစာမရှိချိန်သောက်ရင် မြန်တယ်။ အစာမှာ အဆီများရင် သတ္တိပြတာနှေးမယ်။ HIV နဲ့ အသဲရောင် စီ ရှိနေသူတွေကိုပေးတဲ့ Protease inhibitors ဆေး ပေးနေရင် ဂရုစိုက်ရတယ်။
Viagra 50mg ၁ဝ လုံးကို $19.95 ဒေါ်လာ၊ 100 mg ၁ဝ လုံးကို $29.95 ဒေါ်လာ၊ 150 mg ၁ဝ လုံးကို $39.95 ဒေါ်လာ ဈေး ရှိတယ်။ Viagra နဲ့ တူတဲ့ Revatio 20 mg Tablets နဲ့ ထိုးဆေး Injection 10 mg per 12.5 mL ဖြစ်တယ်။
Kamagra tablet ဆိုတာ Sildenafil Citrate ပါတာပါဘဲ။ ၁ နာရီ ကြိုသောက်ရမယ်။ ၄ နာရီအထိ ခံတယ်။ အသက် သိပ်မကြီးသေးရင် 50 mg သောက်ပါ။ ၆၅ နှစ်ကျော်ရင် 25 mg သာ သောက်ပါ။ တနေ့ထဲမှာ 100 mg ထက် မများစေနဲ့။ 12 လုံးကို $40 ဒေါ်လာ၊ 100 လုံးကို $130 ဒေါ်လာ (အွန်လိုင်း) မှာ ကြော်ညာတယ်။ စားဆေးအပြင် Kamagra Oral Jelly လဲလာတယ်။ အနံ့ပါ ထည့်ထားသေးတယ်။ သရက်သီး၊ ချော့ကလက်၊ ငှက်ပျေားသီး၊ စထောဘယ်ရီ၊ ဗနီလာ၊ အနံ့တွေပါတယ်။ မိနစ် ၂ဝ ဆိုရင် အစွမ်းပြတယ်။ ၅ ထုပ်ကို $35 ဒေါ်လာ၊ 10 ထုပ်ကို $40 ဒေါ်လာ။
Tadalis SX ဆေးကတော့ ၃၆ နာရီအထိ ကြာကြာ အစွမ်းပြတယ်ဆိုတယ်။ 20 mg ၁ဝ လုံးကို $59 ဒေါ်လာ ပေးရတယ်။ ဈေးချိုတဲ့ အမျိုးအစားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ Apcalis, Caverta, Forzest, Levitra, Lovegra, Silagra, Slimona, Tadacip, Womenra, Xenical, Zenegra စတာတွေ ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာ Vigora ဆေးကို သုံးကြပါတယ်။ 100 mg လေးလုံးတကပ်ကို ရူးပီး ၁ဝဝ ပေးရတယ်။ အနီရောင်ဆေးလုံးပါ။ 50 mg က မီးခိုးပြာရောင်၊ စိန်ပွင့်ပုံ၊ အသဲပုံလာတယ်။
Impotency ပန်းသေပန်းညှိုးဆိုတာ အများဆုံးက စိတ်ပိုင်းချို့ယွင်းချက်တခုခု ရှိလို့ပါ။ စိတ်ဖိအားများ၊ အားကုန်၊ စိုးရိမ်စိတ်ကဲ၊ စိတ်ကျ။ ဒီလိုဖြစ်ရသူတွေအတွက် ၉ဝ% ထိရောက်ပြီး၊ တခြားအကြောင်းနဲ့ ဖြစ်သူတွေမှာ ၇ဝ-၈ဝ% ထိရောက်ပါတယ်။ စာတွေရေးထားပါတယ်။
Veetab ကတော့ မြန်မာပြည်မှာရတဲ့ Sildenafil ဆေးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Veetab and Kamagra အကြောင်း FDA သတိပေးချက်မှာ ဒီလို ရေးထားပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးများ မသောက်ရ။ Erythromycin, Ketoconazole, Itraconazole ဆေးတွေနဲ့ တွဲရင် သွေးထဲဆေးပိုများစေမယ်။ နှလုံး-သွေးကြောကျဉ်း ဆေးတွေနဲ့ တွဲမသောက်ရ။ ၁ နာရီ ကြိုသောက်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ တနေ့ ၁ ခါထက် ပိုမသောက်ရပါ။
- December 29, 2014 1 comment:
Erectile Dysfunction Medicines ပန်းသေ-ပန်း ညှိုးအတွက်ပေးတဲ့ဆေးများ
(က) ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ကုသဘို့ပေးတဲ့ဆေးများ
၁။ Sildenafil (Viagra) ဆေး၊
၂။ Vardenafil (Levitra or Staxyn) ဆေးနဲ့
၃။ Tadalafil (Cialis) ဆိုတဲ့ ဆေးနာမည်တွေနဲ့ အမေရိကားမှာ ဝယ်လို့ရတယ်။
၄။ Avanafil (Stendra) ဆေးကိုလည်း FDA ကနေ ၂ဝ၁၂ ဧပြီလမှာ ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ တခြားနာမည်တွေနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ထုတ်လုပ်တယ်။ နာမည်ရှိတဲ့ ဆေးကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်တာကိုသာ သုံးသင့်တယ်။ ဆေးတွေအားလုံး ထိရောက်တယ်၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲ နည်းတယ်။ လူသုံးများလှနေပြီ။ အလုပ်လုပ်ပုံ ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်။
- Nitroglycerin (Nitro-Bid, Minitran), Isosorbide (Dilatrate-SR, Isordil, Monoket) နဲ့ Poppers ခေါ်တဲ့ တရားမဝင်ဆေးသုံးသူတွေ ဒီဆေးနဲ့ တွဲ မသောက်သင့်ဘူး။
၁။ Drugs that may cause impotence ကျား-လိင်အင်္ဂါ မသန်မာခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သောဆေးများ
ကျွန်တော် Tadalafil 20g သောက်ပြီးတာ ၃ ရက်မြောက်ပါပြီ။ သောက်ပြီးကတည်းက ခြေထောက်တွေ မခံမရပ်နိုင်အောင် တစ်ခါတစ်ခါကိုက်ပါတယ်။ ညလည်းမအိပ်ရဘူး တအားကိုက်ပါတယ်ဆရာ။ ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ပြောပေးပါ။
ယောက်ျားတွေမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ ၃ မျိုးရှိတယ်။ (၁) သုက်လွှတ်မြန်တာ၊ (၂) လိင်အင်္ဂါ သန်မှုနည်းနေတာနဲ့ (၂) လိင်အင်္ဂါကို ပိုကြီးရှည်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်။ မိန်းမတွေမှာလိုလိင်စိတ်နည်းတာမျိုးယောက်ျားမှာ ဖြစ်ခဲတယ်။ ကဲလွန်းနေတာတော့ ရှိတယ်။
Impotence ပန်းသေ-ပန်းညှိုးရောဂါကို Erectile dysfunction (ED) လို့ ဆေးစာနဲ့ ခေါ်တယ်။ ရောဂါအခြေအနေအပြော့၊ အပြင်းမတူပါ။ တချို့မှာလုံးဝလိင်အင်္ဂါ သန်မာမှုမရှိဘူး။ တချို့ကြ တခါတလေကောင်းလိုက် တခါတလေမကောင်းလိုက် ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေလဲရှက်ကြတာဘဲ။ ဆရာဝနဆီမလာတာမနည်းလှဘူးထင်ရတယ်။ လူဘယ်လောက်မှာဒီလို ဖြစ်နေတယ် ပြောဘို့ခက်တယ်။ စာရင်းဇယားထားတတ်တဲ့ အမေရိကားမှာသန်း ၃ဝ ရှိမယ်တဲ့။ အသက်အရွယ် သိပ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ငယ်သူတွေမှာနည်းပြီး ကြီးသူတွေမှာအဖြစ်များတယ်။ ၄၅ ကျော်လာရင် နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် စကြပြီ။
(မက်ဆာချူးဆက်) အသက်ကြီးလေ့လာရေးဌာနကနေပြောတာက အသက် ၄ဝ ကျော်ရင် လုံးဝပန်းသေသူ ၅% တိုးလာပြီး၊ ၇ဝ ကျော်ရင် ၁၅% တိုးလာတယ်။ နယ်သာလန်က သုတေသနတခုအရ အသက် ၅ဝ နဲ့ ၅၄ ကြားမှာ ၂ဝ% ရှိတယ်။ ၇ဝ နဲ့ ၇၈ ကြားမှာ ၅ဝ% ရှိတယ်။
Tadalafil ဆေးဟာ PDE5 inhibitors ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ဒီဆေးအုပ်စုထဲမှာ Sildenafil (Viagra) နဲ့ Vardenafil (Levitra) ဆေးတွေလဲပါတယ်။ Viagra (Sildenafil) ဆေးကို ၂၇-၃-၁၉၉၈ ကစပြီး FDA ကနေခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ Viagra ကို ရေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Tadalafil ဆေးကတော့ ၂၁-၁၁-၂ဝဝ၃ ဖြစ်တယ်။ Staxyn နဲ့ Stendra ဆေးတွေကိုလဲ သုံးပါတယ်။ Tadalafil ဆေးကို Adcirca, Cialis နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။
Cialis (Tadalafil) 20 mg ကို လိင်မဆက်ဆံမီ အစာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေးသောက်ရတယ်။ အတိအကျ ဆိုရရင် ၁၆ မိနစ် စောသင့်တယ်။ အစွမ်းက ၃၆ နာရီအထိ ရှိနိုင်တယ်။ တနေ့ထဲမှာတခါသာသောက်သင့်တယ်။ ကျားလိင်အင်္ဂါ သန်မာမှုကိုသာမက ဆက်ဆံမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ပါ ပိုကောင်းစေတယ်လို့ ဆေးညွှန်းကဆိုပါတယ်။
လိင်ကျန်းမာရေးအတွက် Cialis နာမည်နဲ့ရောင်းတယ်။ 2.5, 5, 10 and 20 mg ဆေးပြားတွေ လာတယ်။ အများဆုံး ပေးတာက တနေ့မှာ 10 mg ကို အတူနမဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာ သောက်ရတယ်။ တနေ့မှာ5mg တိုးပြီး 20 mg အထိ ပေးနိုင်တယ်။ ပြန်လျှော့ရင်လဲ အဲလိုပဲ။ ၃၆ နာရီအထိ ဆေးအစွမ်းနေတယ်။ ၇၂ နာရီအတွင်းမှာ 10 mg သာ သောက်သင့်တယ်။ BPH ဆီးကျိတ်ကြီးနေသူကို တနေ့မှာ5mg ပေးတယ်။
Cialis ဆေးကို Weekend Pill လို့ ခေါ်ကြသေးတယ်။ ဆေး ၃ မျိုးလုံးဟာလိုရင်သောက်ပါ အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်တယ်။ တနေ့ ၁ လုံးသောက်နိုင်တယ်ဆိုတာထူးခြားတယ်။ လိင်စိတ်ဖြစ်လာချိန်မှာ ဆေးသောက်လိုက်ရင် လိင်အင်္ဂါ သန်မာလာစေဘို့ သွေးစီးလျှောက်မှုကိုတိုးများလာစေနည်းနဲ့ အကူအညီပေးတယ်။ အဲလိုဖြစ်လာအောင် လိင်တံ သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေနဲ့ လိင်တံ-အသားမွတွေကို ပြေလျှော့စေတယ်။
အာရုံကြောလေးတွေအဖျားနဲ့ Endothelial cells တွေကနေ Nitric oxide ထွက်လာတာလဲ တခန်းတကဏ္ဍကနေ ပါဝင်သေးတယ်။ Phosphodiesterase type5(PDE5) ကိုတားဆီးပေးတာမို့ cGMP ကိုများစေတာ ဖြစ်တယ်။ ဆေးတွေက PDE5 ကိုတားစေပေမဲ့ လိင်စိတ်နိုးဆွမှု လိုသေးတာသတိထားရမယ်။
၂ဝဝ၉ မှာTadalafil (Adcirca) 40 mg ကိုအမေရိကားနဲ့ ဥရောပမှာ၊ ၂ဝ၁ဝ မှာကနေဒါ နဲ့ ဂျပန်မှာ အဆုပ်သွား သွေးလွှတ်ကြောဖိအားတက်ခြင်းရောဂါအတွက် တနေ့တခါသောက် ခွင့်ပြုလာတယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ဆေးကိုသုတေသနလုပ်တုံးက လူပေါင်း ၁၅ဝဝဝ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ လူ ၈ သန်းမကသုံးခဲ့ပြီ။ ခေါင်းကိုက်၊ အစာမကျေ၊ ခါးနာ၊ ကြွက်သားနာ၊ မျက်နှာနီမြန်း၊ နှာခေါင်းပိတ်-နှာရည်ယို။ ဒါပေမဲ့ ၄၈ နာရီကြာရင် ပျောက်ကုန်မယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မျက်စိအကြည့်ခက်တာ တွေ့လာတယ်။ သွေးဖိအားကျစေနိုင်တယ်။ ၄၈ နာရီအတွင်း နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက်ပေးတဲ့ Glyceryltrinitrate ဆေးမသောက်သင့်ဘူး။ ရှားရှားပါးပါး Priapism ခေါ်တဲ့ လိင်တံ သန်မာနေတာ ပြန်မလျှော့တာလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ၄ နာရီနေလို့ မကျရင် အရေးပေါ် ဆေးကုသမှု ခံယူရမယ်။
• နှစ်သစ်ကူးပြန်တော့မယ်။ ဆုတောင်းပေးကြသူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ “ဆုတောင်းပေးသူတွေ ဆုတူရပါစေ”။ ဒါက အသက်ရှည်ဘို့နဲ့ကျန်းမာဘို့ ဆုတောင်းပါ။
• ကျွန်တော့်လက်တဖက်ကို နိုင်ငံရေးအတွက်သုံးပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆုတောင်းတာ သိပ်မတွေ့မိသလို ဆုပြန်ပေးစရာလဲ ရှားပါးလှတယ်။ နှစ်သစ်မှာ အားမရှိတာကို မပြောစကောင်းလို့အယူရှိကြတယ်။ ကျွန်တော်လဲ လိုက်နာပါတယ်။
• ဒီနှစ်သစ်ကူးမှာတော့ အရင် ၄-၅ နှစ်ကဆုတောင်းထက် ပိုပြီးလေးနက်ချင်ကြသူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်လဲပါတယ်။
• ဆေးကုရာမှာ ဆုတောင်းတာတခုတည်းနဲ့မရသလို နိုင်ငံရေးမှာလဲ သင့်တဲ့ကုထုံးအတိုင်းသာ လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
• ရောဂါလဲသိတယ်။ ဆေးလဲသိတယ်။ နာတာရှည်လူမမာကို ဆေးပေးမရဖြစ်နေတယ်။ နေ့ရွှေ့ရက်ရွှေ့ ရွှေ့နေတယ်။ ဆေး ၅ ခွက်သောက်ရင် မရဘူးလားလုပ်နေတယ်။ အိမ်နီးချင်းကနေ ၆ ခွက်သောက်ပါလားတဲ့။ နောက်တယောက်ကလဲ ၁၂ ခွက်သောက်ပါလားတဲ့။ အဲလိုလူတွေက လူနာမဟုတ်ကြတော့ တကယ့်လူမမာမှာ ချမ်းသာရာမရဖြစ်နေရတယ်။
• ကျွန်တော့်ဆုတောင်းကတော့ လာမဲ့နှစ်မှာ လူမမာနဲ့ဆရာဝန် တွေ့ခွင့်ရချင်တာပါပဲဗျာ။
Iron supplement and Liver diseases သံဓါတ်နဲ့ အသည်းရောဂါ
ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးက အသက် ၃၇၊ ကိုယ်ဝန် ၉ ပတ်ထဲမှာပါ။ အမျိုးသမီးက Hepatitis B carrier patient ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာဝန်က သံဓာတ်နဲ့ မတည့်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ သံဓာတ်ပါသော Obimin ဆေး သောက်သင့်/မသင့် သိချင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကတော့ Folic Acid ပဲပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အပြင်ဆေးဆိုင်က Obmin- AZ ဆိုတာ ဝယ်လာခဲ့မိပါတယ်။ သူ့မှာပါတဲ့ ဆေးအမယ်တွေကတော့ ဗီတာမင်တွေအပြင် Ferrous Fumarate – 200 mg ပါတာ ဖတ်ရပါတယ်။
ဆရာ့စာထဲမှာ သန္ဓေသားဟာ သံဓာတ်လိုတယ်လို့ ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ သံဓာတ်ဟာ ကလေးအတွက် မဖြစ်မနေ သောက်သင့်တယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးကတော့ သူ ထိခိုက်ပေမယ့်လည်း သောက်ချင်တယ် လို့ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Obimin ကို ဆက်သောက်သင့်၊ မသင့် ညွှန်ကြားပေးပါဦး။ ဒါမှမဟုတ် မိခင်ရော ကလေးပါ အဆင်ပြေမယ့် နည်းလမ်းရှိရင်လည်း ညွှန်ကြားပေးပါဦး ဆရာ။
နာတာရှည် အသည်းရောဂါ Chronic liver disease ဟာ သေဆုံးစေတဲ့ရောဂါတွေထဲမှာ နံပါတ် ၁ဝ ချိတ်တယ်။ Hepatitis C virus infection စီပိုးကနေ ၇၅-၈ဝ% နာတာရှည်-အသည်းရောဂါ ဖြစ်စေတယ်။ အသည်းအစားထိုးရကလဲ သူ့ကြောင့်များတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဟာ အလွန့်အလွန် အရေးပါတယ်။ အရက်ရှောင်တာကနေ စရမယ်။ စီပိုး ရှိနေသူမှာ Hepatitis A အေ ရော Hepatitis B ဘီပါ ထပ်ဝင်လာတတ်လို့ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးရပါမယ်။ Weight reduction ကိုယ်အလေးချိန် ချပါ။ Exercise ကိုယ်လက်-လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ မတည့်တဲ့ဆေးတွေရှောင်ပါ။
Potentially hepatotoxic medications အသည်းကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ဆေးတွေကတော့ -
ထူးခြားတာကတော့ အသည်းနာတာရှည်ဖြစ်နေသူတွေနဲ့ မတည့်တာတွေထဲမှာ Iron သံဓါတ်၊ Vitamin A ဗီတာမင် အေ၊ တခြားဗီတာမင်တွေ ပါနေတာဖြစ်တယ်။ သံဓါတ်တွေ ပိုများလာစေတာမို့ ဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်။ နဂိုကတည်းက ၃ဝ% မှာ သွေးထဲမယ် သံဓါတ်တွေ များနေပြီဖြစ်တယ်။ HBV carriers ဘီပိုး သယ်ပေးနေသူမှာ Down's syndrome ဦးနှောက်-ရောဂါပါ ရှိနေရင် Hemoglobin (ဟီမိုဂလိုဘင်) များမယ်၊ Hematocrit (ဟီမတိုခရစ်) လဲများနေတယ်၊ Serum iron levels သွေးထဲ သံဓါတ်ပါ များနေတယ်။
• Hepatitis C virus ကြောင့် အသည်းထိခိုက်တာဖြစ်လာရင် Iron storage သံဓါတ်တွေ များနေတယ်။ အကောင်တွေမှာ စမ်းတဲ့အခါ သံဓါတ်ဆေးပေးရင် ရောဂါပိုဆိုးစေတာ တွေ့ရပေမဲ့ လူတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တယ်လို့ အတိအကျ မပြောနိုင်ဘူး။
• Hemodialysis သွေးလဲပေးရတဲ့လူနာတွေကို သံဓါတ်ပေးတာ မထူးခြားဘူး။ Active hepatitis အသည်းရောင်ရောဂါ ထနေချိန်ဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူး။ သံဓါတ်ကို သွေးကြောထဲ ထိုးပေးရင် အသည်းကို မကောင်းဖြစ်လာစေဘို့ အခွင့်အလမ်း နဲနဲလေးပိုရှိတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးကုနေသူတွေကို သွေးထဲက သံဓါတ်အခြေအနေကို စစ်နေသင့်တယ်။
• နာတာရှည် အသည်းဝေဒနာသယ်တွေမှာ အသည်းထဲမှာရော သွေးထဲမှာပါ သံဓါတ် ကဲနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ Hepatitis B virus (HBV) infection ဘီပိုးသယ်ပေးနေသူတွေ ဖြစ်တာတော့ ရှားပါးတယ်။
• Hepatitis B and C အသည်းရောင် ဘီပိုး နဲ့ စီပိုး ရှိသူတွေမှာ သွေးအားနည်းရောဂါ ရလာတတ်တယ်။ ဒါမျိုးကို Autoimmune hemolytic anemia လို့ခေါ်တယ်။ Aplastic anemia/pancytopenia ဆိုတာကတော့ ဖြစ်ခဲတယ်။